anhedonia ရှိနျူကလိယ accumbens နှင့် rostral anterior cingulate cortex ၏အခန်းကဏ္: - အနားယူသည့် EEG, fMRI နှင့် volumetric နည်းပညာများပေါင်းစည်းခြင်း (၂၀၀၉) - သင့် ဦး နှောက်တွင် Porn
anhedonia အတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် rostral anterior cingulate cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကို: EEG အနားယူ၏ပေါင်းစည်းရေး, fMRI နှင့်ထုထည်ကြီးမားသောနည်းစနစ် (2009)
Neuroimage ။ 2009 မေလ 15; 46 (1): 327-37 ။ Doi: 10.1016 / j.neuroimage.2009.01.058 ။ EPub 2009 ဖေဖော်ဝါရီ6။
ဇန်နဝါရီ Wacker,1,2 ဒံယလေက G. အ Dillon,2 နှင့် ဒီယေဂိုအေ Pizzagalli2
Anhedonia, အပျြောအပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လျှော့ချ propensity, စိတ်ကျရောဂါနှင့် schizophrenia အပါအဝင်အများအပြားစိတ်ရောဂါမမှန်, များအတွက်အလားအလာ endophenotype နှင့်အားနည်းချက်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ electroencephalograms, အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်ထုထည်ကြီးမားသော anhedonia နှင့် non-လက်တွေ့နမူနာအတွက်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏အဓိကသော့ချက် node များအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုများအကြား putative အသင်းအဖွဲ့များစုံစမ်းစိစစ်အနားယူကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ anhedonia, ဒါပေမယ့်စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်မကအခြားရောဂါလက္ခဏာတွေလျှော့နျူကလိယ accumbens ဆုလာဘ် (ကငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးတာဝန်အတွက်လာဘ်) ကို (NACC) တုံ့ပြန်မှု, လျှော့ချ NACC အသံအတိုးအကျယ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆ (ဆိုလိုသည်မှာအနားယူတိုးလာလျော့နည်းသွား အဆိုပါ rostral anterior cingulate cortex (rACC) ၌) ယခင်ကအပြုသဘောပုဂ္ဂလဒိဋ္အတွေ့အကြုံကို်ပတ်သက်နေဧရိယာလှုပ်ရှားမှုအနားယူ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, NACC ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုပြောင်းပြန်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တရားဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်းတည်းသောအယူအဆ supporting, rACC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအနားယူနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များကို anhedonia များ၏အာရုံကြောအခြေခံ elucidate နှင့်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခု endophenotype အဖြစ် anhedonia များအတွက်အငြင်းအခုံအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးတယျ။
keywords: စိတ်ကျရောဂါ, anhedonia, striatum, ဆုလာဘ်, anterior cingulate cortex
အစောပိုင်းသဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့ anhedonia, အပျြောအပါးကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လျှော့ချ propensity ဗိုလ်မှူးစိတ်ကျရောဂါ Disorder (MDD) နှင့် schizophrenia (ဥပမာအပါအဝင်စိတ်ရောဂါမမှန်, များအတွက်အားနည်းချက်အချက်ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါ, အကြံပြု Meehl, 1975; Rado, 1956) ။ ဒါကြောင့်အဆိုပါရောဂါ၏တစ်ဦး Cardinal လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူတိုး well- တည်းဟူသောသိသိသာသာပိုပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း quantified နှင့်ဆုလာဘ်တွေရဲ့အာရုံကြော circuitry အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှချည်ထားသောကြောင့်ဒီအမြင်နှင့်ကိုက်ညီ, anhedonia လက်ရှိ MDD တစ်အလားအလာ endophenotype စဉ်းစားသည် နားလည်သဘောပေါက် (Hasler et al ။ , 2004; Pizzagalli et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့်, anhedonia များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်များစိတ်ရောဂါမမှန်များ၏ pathophysiology နှင့် etiology သို့တန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးစေခြင်းငှါနောက်ဆုံးမှာ High-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏အစောပိုင်းမှတ်ပုံတင်ဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်။
ဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့အခြေခံအဆိုပါအာရုံကြောစနစ်များကိုတာရှည်တွေ့မြင်တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကပြန်လည်သုံးသပ် (သိပ္ပံနည်းကျစိစစ်၏အရာဝတ္ထုပါပြီ Berridge နှင့် Kringelbach, 2008) ။ အားဖွငျ့ဖျြောကြွက်များတွင်အစောပိုင်း Self-stimulation လေ့လာမှုများမှစတင်ကာ ကြားရှိနှင့် Milner (1954)တိရစ္ဆာန်အလုပ်၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ပျော်မွေ့၏အတွေ့အကြုံအတွက် mesocorticolimbic လမ်းကြောင်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်သိရသည်။ တောင်မှခေတ်သစ် neuroimaging နည်းစနစ်များထွန်းခင်, Heath (1972) ဤဒေသများ၏တက်ကြွစွာ dopamine ကြွယ်ဝ mesolimbic septum / နျူကလိယ accumbens (NACC) ဒေသသို့လျှပ်နှင့်အတူကိုထညျ့သှငျးတဲ့လူနာအတွက်အားကြီးသော Self-stimulation မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြင့်လူသားတွေအတွက်အစွမ်းထက်, အပြုသဘောစိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) လေ့လာမှုများအမျိုးမျိုးသောအစာစားချင်စိတ်တွေကိုတုံ့ပြန်ထဲမှာ, ventral striatum အပါအဝင် Basal ganglia အတွက်တိုးချဲ့ဖွင့်သုံးဖော်ပြထားပါပြီ (ကြည့်ရှု ဖန် et al ။ , 2002တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်) ။ ထို့အပွငျ dopaminergic tracers သုံးပြီးပေလေ့လာမှုများစိတ်ကြွဆေး၏အပြုသဘောဆောင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှုများ ventral striatum (ဥပမာအတွက် binding အဲဒီ receptor ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပြသပြီ, Drevets et al ။ , 2001; Leyton et al ။ , 2002; Oswald et al ။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် ventral striatum ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအခိုင်အမာမျိုးစုံနည်းလမ်းများသုံးပြီးထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Neuroimaging လေ့လာမှုများကိုလည်း (ထို medial prefrontal cortex အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုမှပျော်မွေ့၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီBerridge နှင့် Kringelbach, 2008; ဖန် et al ။ , 2002) ။ အထူးသဖြင့်, Rolls နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (က de Araujo et al ။ , 2003; Grabenhorst et al ။ , 2008; Rolls et al ။ , 2003, 2008) တစ်ခု ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) တွင်ဤလှုံ့ဆော်မှုမှကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်တုံ့ပြန်မှုကနေလှုံ့ဆော်မှုများကျယ်ပြန့်မျိုးစုံတို့အတွက်သာယာသောပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့် rostral anterior cingulate cortex (rACC) ဒေသများဖော်ပြထားပါပြီ (ပုံ 1) ။ ဤရွေ့ကား cortical ဒေသများ (သိပ်သည်း dopaminergic သွင်းအားစုကိုလက်ခံရရှိGaspar et al ။ , 1989), အ striatum ဖို့စီမံကိန်းကို (အထူးသဖြင့်အတွင်း NACC) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (Haber et al ။ , 2006; Öngürနှင့်စျေး, 2000; Sesack နှင့် Pickel, 1992), ပြပွဲလှုပ်ရှားမှု (dopamine-inducing မူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်တိုးပွါးUdo က de Haes et al ။ , 2007; Völlm et al ။ , 2004) နှင့်ဥပမာ (preference ကိုတရားစီရင်ပိုင်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ, Paulus နှင့်ဖရန့်, 2003(ဆုလာဘ်-guided ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်အတူ), တသမတ်တည်းRushworth et al ။ , 2007).
LORETA လုံးဦးနှောက်လေ့လာဆန်းစစ်။ အဆိုပါ Mood နှင့်တော့ပူပန်လက္ခဏာတွေမေးခွန်းလွှာ (MASQ အေဒီ) နှင့် log-အသွင်ပြောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ် (1.5-6.0 Hz) လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၏ Anhedonic စီးပွားပျက်ကပ်စကေးအကြား voxel-by-voxel ဆက်စပ်မှု၏ရလဒ်များ။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းမြေပုံ thresholded ဖြစ်ပါတယ် ...
ဤအတွေ့ရှိချက် Complementing, လက်တွေ့နမူနာအတွက်လေ့လာမှုများ neuroimaging ထံမှသက်သေအထောက်အထားထွန်းသစ်စ (anhedonic လက္ခဏာတွေအကျိုးကိုစနစ်၏အဓိကသော့ချက် node များအတွက်တုံ့ပြန်မှုဆုချဆက်စပ်နေကြသည်ကွောငျးဖျောပွသEpstein et al ။ , 2006; Juckel et al ။ , 2006a, 2006b; Keedwell et al ။ , 2005; Mitterschiffthaler et al ။ , 2003; Tremblay et al ။ , 2005) ။ ဥပမာ, Epstein et al ။ (2006) စိတ်ဓာတ်ကျဘာသာရပ်များအပြုသဘောဓါတ်ပုံတွေကိုမှလျှော့ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ကြသည်, ဤတုံ့ပြန်မှုများ၏အစွမ်းသတ္တိကိုအဆိုး Self-အစီရင်ခံ anhedonia ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပင် MDD နှင့်အတူတကျိပ်နှစ်ပါးသောလူနာတစ်ဦးနမူနာအတွက်, Keedwell et al ။ (2005) anhedonia (သို့သော်မပေးစိတ်ကျရောဂါပြင်းထန်မှု) နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုမှ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာဤစာရေးသူလည်းတစ်ဦးကိုတွေ့ အပြုသဘောဆောင် အဆိုပါ vmPFC (BA10) နှင့် rACC (BA24 / 32) တွင် anhedonia နှင့်တုံ့ပြန်မှုများအကြားဆက်စပ်မှု။ ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက် anhedonia ၏ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှုအပေါ်သာ neuroimaging လေ့လာမှုဖြစ်ဟန်သောအရာကိုခုနှစ်, Harvey et al ။ (2007) anhedonia နှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရုပ်ပုံများကိုမှ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ သူတို့က, သို့သော်, ပုံတူပွားခဲ့ပါ Keedwell et al ။ ရဲ့ (2005) တစ်ဦး၏လေ့လာရေး အပြုသဘောဆောင် ထပ် rACC သို့တိုးချဲ့သည့် vmPFC အတွက်ဒေသတွင်း၌အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှ anhedonia နှင့်တုံ့ပြန်မှုများအကြားဆက်စပ်မှု။ ဖြည့်စွက်ကာ, Harvey et al ။ (2007) anhedonia အဆိုပါ NACC သို့တိုးချဲ့ caudate ဒေသများတွင်လျှော့အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အတူတူယူ, ဤသည်ယခင်တွေ့ရှိချက် anhedonia အဆိုပါ striatum အတွက်အဖြစ် vmPFC / rACC အတွက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှတိုးချဲ့တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူအပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်လျှော့အသံအတိုးအကျယ်မှဆီးအတားမရှိတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆုံးစွန်သောအသင်းအဖွဲ့, ဥပမာ (အထကျအသေးစိတ်အဖြစ် vmPFC / rACC အတွက်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းအပြုသဘောအပျြောအပါး၏ ratings နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းပေးထား, အံ့သြစရာဖြစ်ပါသည် က de Araujo et al ။ , 2003; Grabenhorst et al ။ , 2008; Rolls et al ။ , 2008; Rolls et al ။ , 2003) ။ အရေးကြီးတာက, အ vmPFC / အနားယူနေစဉ်အတွင်း activated သောဦးနှောက်ရဲ့ default အကွန်ရက်အတွက်အဓိက rACC ကိန်းဂဏန်းများ, အလုပ်တခုကို-အခမဲ့ပြည်နယ်နှင့်သင်တန်းသားများကိုတာဝန်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသောအခါ Deactivate ဖြစ်လာ (Buckner et al ။ , 2008) ။ အမှန်စင်စစ်အထောက်အထားဆုံလိုင်းများ medial တိုကျရိုကျဒေသများတွင် anhedonia နှင့်တာဝန်-related activation အကြားအသင်းအဖွဲ့များပြည်နယ်လှုပ်ရှားမှုအနားယူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။
ပထမဦးစွာစိတ်ကျရောဂါ, (ဥပမာလျော့နည်းသွားအချို့လေ့လာမှုများသတင်းပို့အတူ vmPFC / rACC အတွက်အလုပ်မဖြစ်ကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် Drevets et al ။ , 1997; Ito က et al ။ , 1996; Mayberg et al ။ , 1994) နှင့်အခြားသူများကို (ဥပမာတိုးတက် ကနေဒီ et al ။ , 2001; Videbech et al ။ , 2002) လှုပ်ရှားမှုနှင့် rACC လှုပ်ရှားမှုအနားယူလျော့နည်းသွားကုသမှုဆင်းရဲသားတုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွေ့ရှိထားပြီး (Mayberg et al ။ , 1997; Mülert et al ။ , 2007; Pizzagalli et al ။ , 2001) ။ ဒုတိယအချက်, PET နှင့် electroencephalograph (EEG) လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာနှစ်ခုလုံးကိုသုံးပြီး Pizzagalli et al ။ (2004) အစီရင်ခံကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား (ဆိုလိုသည်မှာလျှော့ချဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာ) melancholia နှင့်အတူလူနာအတွက် subgenual ACC (BA 25) တွင် - psychomotor နှောင့်အယှက်များနှင့်နေရာအနှံ့ anhedonia ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာစိတ်ကျရောဂါမျိုးကွဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လျှော့ချကျိန်းဝပ် medial PFC လှုပ်ရှားမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများနှင့်ရောဂါများ (လျော့ချတာဝန်-သွေးဆောင် medial PFC Deactivate နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ဖလက်ချာ et al ။ , 1998; ကနေဒီ et al ။ , 2006; Lustig et al ။ , 2003), နှင့်မကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်များက Grimm et al ။ (2008) ဒီလည်းစိတ်ကျရောဂါလျှောက်ထားစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အထူးသညျဤစာရေးဆရာများနီးကပ်စွာနေဖြင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသူများကိုက်ညီဧရိယာအပါအဝင်က default ကွန်ယက်အများအပြားဒေသများရှိထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်စိတ်ဓာတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်သေးငယ်တာဝန်-သွေးဆောင် Deactivate, လေ့လာတွေ့ရှိ Keedwell et al ။ (2005) နှင့် Harvey et al ။ (2007)။ စုပေါင်းဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှ anhedonia နှင့် vmPFC / rACC activation အကြားထင်ရသောဝိရောဓိအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့လှုံ့ဆော်မှု-အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းသေးငယ် Deactivate မှုကြောင့်ဤဒေသရှိနှင့် anhedonia အတွက်လျှော့အခြေခံလုပ်ဆောင်မှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့မှဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာနိမ့်အနားယူ vmPFC / rACC လှုပ်ရှားမှုနဲ့ anhedonia အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များ၏ယူဆချက်ယခင်ကစမ်းသပ်ပြီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ထိုကဲ့သို့သောအသင်းအဖွဲ့တည်ရှိပါက EEG ၏မြစ်ဝကျွန်းပေါ် frequency band အတွက်ထင်ရှားဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ အဖြစ် Knyazev (2007) မကြာသေးမီကကွဲပြားခြားနားသော EEG လှို၏အလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမိမိပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်မှတ်ချက်ချ, လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအရေအတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရစ်သမ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် salience ထောက်လှမ်းတဲ့လက်မှတ်သောစိတ်ကူးထောက်ခံပါတယ်။ ပထမဦးစွာတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ (ဥပမာ NACC အဖြစ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အဓိကသော့ချက် node များအတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုမီးစက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြLeung နှင့် Yim, 1993), ventral pallidum (Lavin နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 1996), နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၏ dopaminergic အာရုံခံ (တော်ကကျေးဇူး, 1995) ။ အဆိုပါ striatum အတွက်လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုလူသားတွေအတွက် noninvasively တိုင်းတာမရနိုင်ပေမယ့်စက္ကန့်, EEG အရင်းအမြစ်မူပြောင်းခြင်းလေ့လာမှုများ (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှု၏မျိုးဆက်အတွက် anterior medial တိုကျရိုကျဒေသများပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီမိုက်ကယ် et al ။ , 1992; 1993) ။ ပြင်းထန်စွာအဲဒီသတင်းရင်းမြစ်အပြန်အလှန်အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာမှချိတ်ဆက်ဒေသများနှင့်အတူထပ်နှင့် (အထက်ကြည့်ပါ) Self-အစီရင်ခံအပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိအဖြစ် fMRI လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထွန်းသစ်စ။ တတိယ, မရရှိနိုင်တိရိစ္ဆာန်ဒေတာကို (NACC အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုChang et al ။ , 1995; Ferger et al ။ , 1994; Kropf နှင့် Kuschinsky, 1993; Leung နှင့် Yim, 1993; Luoh et al ။ , 1994) ။ စတုတ္ထ opioid နှင့်ကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးလူသားတွေအတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ (Greenwald နှင့် Roehrs, 2005; ရိဒ် et al ။ , 2006; Scott et al ။ , 1991) ။ သို့သော်တိရစ္ဆာန်ဒေတာမတူဘဲအတွက်အစားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်လျှောက်လျော့နည်း၏တိုး (ကိုလညျးရှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် Heath, 1972) ။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့ဒေတာများအကြားကဤသိသာကှာဟလက်ရှိဖြေရှင်းမရနိုငျသွားရမည်အကြောင်း, အမရရှိနိုင်သက်သေအထောက်အထားမည်သို့ပင်ဆိုစေ EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ ထိုကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုနောက်ထပ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့်ဆုလာဘ်အကြားအဆိုပြုထား link ကို elucidate ရည်ရွယ်သည်။
ပေါင်းလဒ်ခုနှစ်, ပစ္စုပ္ပန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အဓိကပန်းတိုင်များဖြစ်ကြသည်: (1) တစ်ဦးငွေကြေးဆိုင်ရာမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးနှင့် တွဲဖက်. fMRI အားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ် anhedonia အဆိုးနှင့်အပြုသဘောအသီးသီး, အ ventral striatum နှင့် vmPFC / rACC အတွက်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန် ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်ကွန်ယက်ကိုစုဆောင်းဖို့လူသိများတာဝန် (Dillon et al ။ , 2008); ပုံတူပွားရန် (2) Harvey et al ။ ရဲ့ (2007) anhedonia နှင့် striatal အသံအတိုးအကျယ်အကြားတစ်ဦးပြောင်းပြန်အသင်းအဖွဲ့များ၏လေ့လာရေး; (3) anhedonia တိုးလာကျိန်းဝပ် EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် vmPFC / rACC အတွက် (ဆိုလိုသည်မှာ, ကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား); နှင့် (4) EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ် (အကြားအကြံပြု link ကိုစုံစမ်းKnyazev, 2007) fMRI မှတဆင့်တိုင်းတာ striatal ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်နှင့် vmPFC / rACC အတွက် EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအနားယူသည်။
electrophysiological အမူအကျင့်ပေါင်းစပ်ကြောင်းပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုကနေပစ္စုပ္ပန်အစီရင်ခံစာကို stem ကနေဒေတာ, (EEG, အဖြစ်အပျက်-related အလားအလာအနားယူ) နှင့်တစ်ဦးအတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် anhedonia ၏ neurobiology စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် (fMRI, အခြေခံအဆောက်အဦး MRI) အစီအမံအဖြစ်မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ neuroimaging Non-လက်တွေ့နမူနာ။ ဒီနမူနာအပေါ်တစ်ဦးကယခင်ထုတ်ဝေ (ကအားဖြည့်လုပ်ငန်းတာဝန်စဉ်အတွင်းစုဆောင်းဖြစ်ရပ်-related အလားအလာ data တွေကိုအာရုံစိုက်ထားပါတယ်Santesso et al ။ , 2008) နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇနှင့် fMRI ဒေတာများအကြားလင့်များအပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာ) ပြင်ဆင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်မှု (Dillon, Bogdan, Fagerness, Holmes, Perlis နှင့် Pizzagalli ၌တည်ရှိ၏။ ကြိုတင်အစီရင်ခံစာများနှင့်မတူဘဲလက်ရှိလေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ဦးချင်းစီ anhedonia အတွက်ကွဲပြားမှုနှင့် (1) ကျိန်းဝပ် EEG ဒေတာနှင့် (2) ဆုလာဘ်-related Basal ganglia ဒေသ functional ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ထုထည်ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ သုံးယောက် neuroimaging ပုံစံများအကြားအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်အကဲဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ် secondary ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း။
ကနဦးအမူအကျင့် session တစ်ခုမှာတော့အသက်အနှစ် 237 နှင့် 18 အကြား 40 ကျန်းမာလူကြီးများနှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုများ၏တဦးတည်း၏မှန်ကန်သောဖော်ထုတ်ခြင်းပိုပြီးမကြာခဏဆုခခြံခဲ့သည့်အတွက်တစ်ဦးနှစ်ဦး-အခြားရွေးချယ်စရာအတင်းအဓမ္မရွေးချယ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးစီး။ လက်တွေ့လွတ်လပ်သောနှင့် Non-လက်တွေ့နမူနာအတွက်မတိုင်မီကအလုပ် (ဒီဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်တာဝန်ဆုလာဘ်တုန့်ပြန်နှင့် anhedonia အတွက်အပြောင်းအလဲမှအထိခိုက်မခံကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသBogdan နှင့် Pizzagalli, 2006; Pizzagalli et al ။ , 2009; Pizzagalli et al ။ , 2005) ။ ဆေးဘက်သို့မဟုတ်အာရုံကြောရောဂါ၏မရှိခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း, လက်ရှိအရက် / ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု, ဆေးလိပ်သောက်, နောက်ဆုံးစဉ်အတွင်းစိတ်ဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်း, ကနဦး session တစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံပြီး, ထို 47 ဘာသာရပ်များ၏ 170 လက်ရှိလေ့လာမှု (Right-သန်များအတွက်ပါဝင်စံတွေ့ဆုံ2ရက်သတ္တပတ်, ဒါမှမဟုတ် claustrophobia) (session တစ်ခုအမိန့် counterbalanced) က EEG နှင့် fMRI အစည်းအဝေးများဘို့ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်တာဝန်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရွေးချယ်ထားသည့်ခဲ့ကြသည်: အထူးသကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဆုလာဘ်သင်ယူမှု၏ဖြန့်ဝေ၏အထက်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်း 20% အတွက်သင်တန်းသားများကိုဖော်ထုတ်, အဲဒီနောက်ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူကျန်ရှိနေသေးသောသင်တန်းသားများကိုရှေးခယျြ အထွေထွေလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆုလာဘ်သင်ယူမှုအတွက်စဉ်ဆက်ရရှိ၏ (ရွေးချယ်ရေးစံအပေါ်နောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေ့ Santesso et al ။ , 2008).
ဤအ 47 သင်တန်းသားများ၏, 41 (5 အာဖရိကန်အမေရိကန်,5အာရှ, 29 ကော့ကေးဆပ်အခြား 2) က EEG session တစ်ခုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူညီ, ဤ၏ 33 ကိုလည်း fMRI session ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အားလုံး 41 သင်တန်းသားများကို (အသက်ဆိုလို: 21.2 နှစ်, SD က:; 3.1 ပညာရေးကိုဆိုလိုတာ: 14.2 နှစ်, SD က: 1.5; 20 အထီး) အသုံးဝင်သောကျိန်းဝပ် EEG ဒေတာရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးအစည်းအဝေးများပြီးစီးသူ 33 သင်တန်းသားများ၏, ငါးနမူနာထဲမှာရရှိလာတဲ့အလွန်အကျွံရွေ့လျားမှုအပိုငျးအမှုကြောင့်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးအဆိုပါ fMRI မှဖယ်ထုတ်လိုက်ခဲ့သည် N = ပု fMRI လေ့လာဆန်းစစ်ဘို့ 28 (21.5 နှစ်, SD က: အသက်အရွယ်ဆိုလို 3.5; ပညာရေးကိုဆိုလိုတာ: 14.5 နှစ်, SD က: 1.6; 14 အထီး) ။ DSM-IV များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဖြတ်အဖြစ်အပြင်တိကျတဲ့ phobia နှင့်အသေးစားစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်တသားတများနှင့်တဦးတည်းပါဝင်သူ မှစ. , သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှ, လက်ရှိစိတ်ရောဂါမမှန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အတိတ်ဝင်ရိုးတန်းငါရောဂါဗေဒ၏သက်သေအထောက်အထားများ MDD အတိတ် (သင်တန်းသားများကိုတစ်လူနည်းစုအတွက်ရှိခဲ့သည်: n = 1; မဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါအတိတ်စိတ်ကျရောဂါရောဂါ: n = 1; ရောဂါအစာစားခြင်းအတိတ်မူးရူး: n = 1; အတိတ် anorexia nervosa: n = 1; အတိတ်အရက်အလွဲသုံးစားမှု: n = 1) ။
သင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏အကြိမ်တာဝန်င်ငွေနှင့်ငွေကြေးပြန်လည်အတွက်အသီးသီး, အမူအကျင့်, EEG နှင့် fMRI အစည်းအဝေးများအဘို့ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 12, $ 45 နှင့် $ 80 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုစာဖြင့်ရေးသားအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ပေးအပေါင်းတို့နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဟားဗတ်တက္ကသိုလ်နှင့်အပေါင်းအဖေါ်များ-မက်ဆာချူးဆက်အထွေထွေဆေးရုံကြီးပြည်တွင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့မှာလူ့ဘာသာရပ်များ၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ကော်မတီကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အမူအကျင့် session တစ်ခု
အဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့် EEG session တစ်ခု, ထိုစိတ်ခံစားချက်များ၏ရေတိုဗားရှင်းနဲ့တော့ပူပန်လက္ခဏာတွေမေးခွန်းလွှာ (MASQ, နှစ်ဦးစလုံးမှာ Watson ဟာ et al ။ , 1995စိုးရိမျရောဂါလက္ခဏာများ:; အထွေထွေဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, GDD:) Anhedonic စီးပွားပျက်ကပ်, အေဒီ, စိုးရိမ်ပူပန်-တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာ (စိုးရိမ် arousal, AA ကို) နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန် (အထွေထွေဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှစ်ဦးစလုံးမှဘုံယေဘုယျဒုက္ခဆင်းရဲရောဂါလက္ခဏာ) (စိတ်ကျရောဂါ-တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတိုင်းတာရန်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည် , GDA) ။ ဥပမာ (အခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအကြေးခွံနှငျ့ ပတျသကျ. နှင့် convergence / ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတရားဝင်မှု: မတိုင်မီကလေ့လာမှုများအားလုံး MASQ အကြေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ကျောင်းသားနမူနာအတွက် .85-.93 ကိန်း alpha) အပိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ Watson ဟာ et al ။ , 1995) ။ (ပျှမ်းမျှကြားကာလ = 36.6 ရက်ပေါင်း; အကွာအဝေး 2-106 ရက်) လက်ရှိနမူနာ, အမူအကျင့်များနှင့် EEG session တစ်ခုအကြားစမ်းသပ်-retest ယုံကြည်စိတ်ချရခုနှစ်တွင်အေဒီ, GDD, AA ကိုနှင့် GDA အကြေးခွံများ .69, .62, .49 ခဲ့သည် အသီးသီးနှင့် .70, မြင့်သောတည်ငြိမ်ရေးမှအလယ်အလတ်ညွှန်ပြ။ ပစ္စုပ္ပန်အတွက်ဇီဝကမ္မအစီအမံများအတွက် Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုကိုသရုပ်ပြ, နှင့် (1) ကို MASQ-ဇီဝြဖစ်စဉ်အပေါ်ပြည်နယ်သက်ရောက်မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျော့နည်းသာ (2) နိုင်ရန်အတွက်အမူအကျင့် session တစ်ခုကနေ MASQ ရမှတ်ဆန်းစစ်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး EEG နှင့် fMRI နှစ်ဦးစလုံးအတိုင်းအတာအတွက် MASQ ဒေတာကနေတစ်ဦးကွဲပြားခြားနား session တစ်ခုမှာရရှိသောခဲ့ကြသည်သေချာအားဖြင့်ဆက်စပ်မှု။ နှစ်ခု MASQ အုပ်ချုပ်ရေး (တောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာမရရှိနိုင်ပါဒေတာ) ၏ပျမ်းမျှခွဲခြားစိတ်ဖြာကျသောအခါသို့သော်အလွန်ဆင်တူရလာဒ်များပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပြည်နယ်အပြုသဘောဆောင်သော၏ဗားရှင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဇယား (PANAS, အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု Watson ဟာ et al ။ , 1988) လက်ရှိခံစားချက်အကဲဖြတ်ရန်ဖို့အမူအကျင့်များနှင့် EEG အစည်းအဝေးများနှစ်ဦးစလုံးမှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
အနားယူ EEG session တစ်ခု
အဆိုပါအနားယူ EEG ရှစ်မိနစ်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနေစဉ်သင်တန်းသားများကိုနေတုန်းပဲထိုင်ပြီးအနားယူရန်ညွှန်ကြားထားခဲ့သည် (မကျြစိနှငျ့4မိနစ်ဖွင့်ထား, မကျြစိနှငျ့4မိနစ် counterbalanced နိုင်ရန်အတွက်ပိတ်သိမ်း) ။ ထို့နောက်သင်တန်းသားများကို (ဖြစ်ရပ်-related အလားအလာအသံသွင်းစဉ်ကဘာသာရပ်ရွေးချယ်မှုကိုများအတွက်အသုံးပြုသောဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်တာဝန်ထပ်ခါတလဲလဲSantesso et al ။ , 2008).
MRI session တစ်ခု
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ MRI အချက်အလက်များ၏စုစည်းပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်စဉ်အတွင်းတစ်ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေး (MID) အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလယ်အစောပိုင်းကလွတ်လပ်သောနမူနာ (တှငျဖျောပွထားလျက်ရှိသည်Dillon et al ။ , 2008) ။ အတိုချုပ်, သင်တန်းသားများကို5စမ်းသပ်မှုတွေ၏ 24 လုပ်ကွက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ (- $), အဘယ်သူမျှမမက်လုံးပေး (1.5 $) အလားအလာငွေကြေးအကျိုးအမြတ် (+ $) အချက်ပြခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကြောင့်: တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်သုံးအညီအမျှဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို (0 ့ကြာချိန်) ကိုတဦးတည်း၏တင်ပြချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ 3-7.5 s ကိုတစ် Jitter အချင်းချင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကြားကာလ (ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI) ပြီးနောက်အနီရောင်စတုရန်းပါဝင်သူတစ်ဦး button ကိုစာနယ်ဇင်းနှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်အရာပေးအပ်ခဲ့သညျ။ တစ်စက္ကန့်အပြီးတွင်ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI (4.4-8.9 s) ကို jittered တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုအမြတ် (အကွာအဝေး: $ 1.96 မှ $ 2.34; ယုတ်: $ 2.15) ကိုညွှန်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်, No-ပြောင်းလဲမှု, ဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဒဏ် (အကွာအဝေး: - $ 1.81 မှ - $ 2.19; ဆိုလို - $ 2.00) ။ သင်တန်းသားများကိုလျင်မြန်စွာ RTs အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေတိုးလာနှင့်ပြစ်ဒဏ်များကိုလက်ခံရရှိ၏ဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းသွားကြောင်းဤကဲ့သို့သောပစ်မှတ်ထိခိုက်ရုံးတင်စစ်ဆေးရလဒ်များမှသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန် (RT ကို) ကိုပြောသည်ခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့, ဆုလာဘ်များနှင့်အရှုံးစမ်းသပ်မှုတွေ၏ 50% (တွေ့မြင်အသီးသီးအကျိုးအမြတ်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များ၏ပေးပို့မှု Dillon et al ။ , 2008,) နောက်ထပ်အသေးစိတ်များအတွက်။ ရလဒ်ကိုပေးပို့ဖယ်ရှား-coupled ခဲ့တာကဒီဖက်ရှင်အတွက်တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီရလဒ်ကို featuring စမ်းသပ်မှုတွေ၏တန်းတူအရေအတွက်ကအတူနေတဲ့အပြည့်အဝမျှမျှတတဒီဇိုင်းကိုခွင့်ပြုနိုင်ရန်အတွက်။ သို့သော်ပစ်မှတ်ထားတစ်ဦးအပြုသဘောရလဒ် (ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ဥပမာလာဘ်) ကိုဦးဆောင်စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, အလုပ်တခုကိုယုံကြည်သူများနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထိတွေ့မှုအချိန် scan ဖတ်မတိုင်မီချက်ချင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့ 85-ရုံးတင်စစ်ဆေးအလေ့အကျင့် session တစ်ခုအတွင်းမှာစုဆောင်း RTs ၏ 40th ရာခိုင်နှုန်းမှစာအဆက်အသွယ်; အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးရလဒ် (ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ဥပမာအဘယ်သူမျှမလာဘ်) လိုက်လျောရန်စီစဉ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့, ထိတွေ့မှုအချိန်ပစ်မှတ်ထားလေ့အကျင့် RTs ၏ 15th ရာခိုင်နှုန်းမှစာအဆက်အသွယ်။ ရလဒ်ကိုပေးပို့မှု၏အမိန့် fMRI ဒီဇိုင်း (၏စာရင်းအင်းထိရောက်မှု optimized တဲ့ Pre-စိတ်ပိုင်းဖြတ် sequence ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်Dale က 1999).
အနားယူ EEG အဆိုပါ vertex မှကိုးကား 128-250 Hz Analog စ filtering ကိုအတူ 0.1 Hz မှာ 100-ရုပ်သံလိုင်းလျှပ်စစ် Geodesic စနစ် (EGI Inc ကို, ယူဂျင်း, OR) ကို အသုံးပြု. မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ impedance 50 kΩအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထားရှိမည်ခဲ့ကြသည်။ ဒေတာကိုပျမ်းမျှရည်ညွှန်းဖို့ Off-line ကို re-ကိုးကားခဲ့သည်။ မျက်စိ-လှုပ်ရှားမှုအပိုငျးအဆုံးပြီးနောက်တစ်လွတ်လပ်သောစိတျအပိုငျးအားသုံးသပ်ခြင်းဦးနှောက် Vision ၏ Analyzer (ဦးနှောက်ကုန်ပစ္စည်းများ GmbH, ဂျာမနီ) တွင်အကောင်အထည်ဖော်သုံးပြီး data ကိုအမြင်အာရုံကနျြအပိုငျးအဘို့အသွင်းယူပေးခဲ့သည်များနှင့်ယိုယွင်း channel များကိုတစ်ဦး spline Interpol ကို အသုံးပြု. interpolated ခဲ့ကြသည်။
အောက်ပါကြိုတင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ဥပမာ, Pizzagalli et al ။ , 2001, 2004, 2006), အနိမျ့ဆုံးဖြတ်ချက် Electromagnetic Tomography (LORETA, Pascual-Marquis et al ။ , 1999) အမျိုးမျိုးသော frequency band အတွက် intracerebral လက်ရှိသိပ်သည်းဆအနားယူခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအဆုံး, ရောင်စဉ်တန်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းပထမဦးဆုံးရှေးဟောင်းပစ္စည်း-အခမဲ့အသွင်ပြောင်းနေတဲ့ discrete Fourier သုံးပြီး 2048-ms ယုဂ်နှင့်ရထားတှဲ windowing ကိုအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (1.5-6.0 Hz), theta (6.5-8.0 Hz), alpha1 (8.5-10.0 Hz), alpha2 (10.5-12.0 Hz), beta1 (LORETA အဲဒီနောက်အောက်ပါခညျြအနှောများအတွက် intracerebral လက်ရှိသိပ်သည်းဆဖြန့်ဖြူးခန့်မှန်းရန်အသုံးပြုခဲ့သည် 12.5-18.0 Hz), beta2 (18.5-21.0 Hz), beta3 (21.5-30.0 Hz), နှင့် Gamma (36.5-44.0 Hz) ။ ကြိုတင်တွေ့ရှိချက် (ဥပမာအပေါ်အခြေခံပြီး, Knyazev, 2007; Pizzagalli et al ။ , 2004; Scheeringa et al ။ , 2008), မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသလှုပ်ရှားမှုအကျိုးစီးပွား၏အဓိကအကြိမ်ရေရှိ၏ အခြားအ EEG ခညျြအနှောဖြစ်နိုင်သောတွေ့ရှိချက်များ၏တိကျသောအကဲဖြတ်ဖို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။
(တစ်ဦးချင်းစီ voxel မှာn = 2394; voxel resolution ကို =7မီလီမီတာ3စတုရန်းမီတာလျှင်အမ်ပီယာ, A / မီတာ:), လက်ရှိသိပ်သည်းဆရှစ် frequency band ၏အသီးအသီးအတွင်း intracerebral လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၏နှစ်ထပ်ပြင်းအား (ယူနစ်အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်2) ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်နှင့်တီးဝိုင်းဘို့, LORETA တန်ဖိုးများ 1 စုစုပေါင်းအာဏာပုံမှန်ခဲ့ကြသည်ပြီးတော့စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမတိုင်မီအသွင်ပြောင်း log ။ MASQ အေဒီနှင့် log-အသွင်ပြောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြား Voxel-by-voxel Pearson ဆက်စပ်ပြီးတော့တွက်ချက်မှာ thresholding ပြီးနောက်စံ MRI template ကို (MNI space) ကိုအပေါ်ပြသခဲ့ကြသည် p <.001 (မမှန်မကန်) ။
voxel-by-voxel ဆက်စပ်မှုအပြင်, ငါတို့သည်လည်းအများအပြားအတွက်လက်ရှိသိပ်သည်းဆခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ တစ်ဦး အဆိုပါ ACC အတွင်းအကျိုးစီးပွားသတ်မှတ်ဒေသများ (ROIs) ။ ဤသည်ချဉ်းကပ်နည်း (1) ကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ, (2) စာရင်းအင်းပါဝါကိုတိုးမြှင့် MASQ အေဒီနှင့်အခြား MASQ အကြားနှိုင်းယှဉ်စာရင်းအင်းတံခါးခုံကို (လက္ခဏာ-specific ၏ဆိုလိုသည်မှာအကဲဖြတ်) နှင့် (3) ကဘက်မလိုက် scales ခွင့်ပြုအမျိုးမျိုးသော ACC subdivisions (အကြားနှိုင်းယှဉ်ခွင့်ပြု ဆိုလိုသည်မှာဒေသ-specific ၏အကဲဖြတ်) ။ ဒီအဆုံးမှတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်နှင့်တီးဝိုင်းဘို့, ပျမ်းမျှအားလက်ရှိသိပ်သည်းဆကတော့ ACC ၏အောက်ပါ subdivisions ဘို့တွက်ချက်ခဲ့သည် (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုဘို့ ဘုရ်ှ et al ။ , 2000; Pizzagalli et al ။ , 2006): ပို rostral, BA25 (17 voxels အပါအဝငျ "ထိခိုက်စေ" ငျဒသေ, 5.83 စင်တီမီတာ3), BA24 (12 voxels, 4.12 စင်တီမီတာ3), နှင့် BA32 (17 voxels, 5.83 စင်တီမီတာ3), နှင့်ပိုမို dorsal, BA32 အပါအဝငျ "သိမြင်မှု" ငျဒသေ, '(20 voxels, 6.86 စင်တီမီတာ3) နှင့် BA24 '(48 voxels, 16.46 စင်တီမီတာ3) ။ ဤအ subdivisions ၏တည်နေရာနှင့်အတိုင်းအတာ (ဖွဲ့စည်းပုံ-ဖြစ်တန်ရာကိန်း Maps ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်Lancaster et al ။ , 1997) နှင့်ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားများ (Devinsky et al ။ , 1995; Vogt et al ။ , 1995), ယခင်ကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (Pizzagalli et al ။ , 2006) ။ ပျမ်းမျှအားတွင်, လက်ရှိသိပ်သည်းဆအနားယူ၏ခန့်မှန်းချက် 110.7 ရှေးဟောင်းပစ္စည်း-အခမဲ့ယုဂ် (37.2, အကွာအဝေး: 37-174 SD) အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်။ BAs 24, 25 နှင့် BA32 အတွက်လက်ရှိသိပ်သည်းဆရှေးဟောင်းပစ္စည်း-အခမဲ့ယုဂ်၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီပျမ်းမျှမှပံ့ပိုးမျက်စိ-ပွင့်လင်းယုဂ်၏ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုခုနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရ Log-အသွင်ပြောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အပေါင်းတို့, rs ကို (39) ≤ .10, p ≥ .52 ။
အဆိုပါပုံရိပ် protocol ကိုနှင့် fMRI အပြောင်းအလဲနဲ့စီးယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့ကြ (Dillon et al ။ , 2008; Santesso et al ။ , 2008) ။ အတိုချုပ်, fMRI ဒေတာတစ်ဦး 1.5 T ကဆငျဖိုနီ / sonata အကင်နာ (; Iselin, NJ Siemens ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ) ရက်နေ့တွင်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ TR / TE: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်စဉ်အတွင်း gradient ကိုပဲ့တင်သံ T2 * echoplanar ပုံရိပ်တွေအောက်ပါ parameters တွေကိုသုံးပြီးဝယ်ယူခဲ့ကြသည် -weighted 2500 / 35; FOV: 200 မီလီမီတာ; matrix: 64 × 64; 35 ချပ်; 222 volumes ကို; voxels: 3.125 × 3.125 ×3မီလီမီတာ။ 1 မီလီမီတာ; matrix: 2730 × 3.39; 256 ချပ်; voxels: 192; FOV 192 / 128 ms: တစ်ဦးက high-resolution ကို T1.33 မာန်တင်း MPRAGE ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသံအတိုးအကျယ်စံသတ်မှတ်ချက်ဘောင် (TR / TE သုံးပြီးတည်ဆောက်ပုံ ROIs ၏ခန္ဓာဗေဒပြည်တွင်းနှင့်ထုတ်ယူဘို့ကောက်ယူခဲ့သည် × 1.33 × 1 မီလီမီတာ) ။ padding ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို minimize လုပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း FS-fast ( အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့သည်http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu) နှင့် FreeSurfer (Fischl et al ။ , 2002; Fischl et al ။ , 2004) ။ pre-အပြောင်းအလဲနဲ့ရွေ့လျားမှုနှင့်အချပ်အချိန်ဆုံးမခြင်း, နှေးကွေးနေ linear ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဖယ်ရှားရေး, ပြင်းထန်မှုပုံမှန်နှင့်6မီလီမီတာ FWHM Gaussian filter ကိုအတူ Spatial တင်ပါသည်ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးကယာယီ Whiten filter ကိုအသံဗလံအတွက် autocorrelation အဘို့ခန့်မှန်းမှုနှင့်ပြင်ပေးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် (ထို hemodynamic တုံ့ပြန်မှုပုံစံရည်ရွယ်) ဟာ gamma function ကိုနှိုးဆွစတင်ခြင်းနှင့်အတူ convolved နှင့်အထွေထွေ linear မော်ဒယ်ပုံစံနှင့်ဒေတာများအကြားမထိုက်မတန်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ 3.75 မီလီမီတာသို့မဟုတ်ဒီဂရီထက် သာ. ကြီးမြတ် incremental (အသံအတိုးအကျယ်-to-အသံအတိုးအကျယ်) သို့မဟုတ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခေါင်းကိုလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုကို (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်n = 5) ။ ကျန်ရှိနေသေးသောသင်တန်းသားများအဘို့, ရွေ့လျားမှု parameters တွေကိုစိတ်အညစ် regressors အဖြစ်မော်ဒယ်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။
ဒီလေ့လာမှုအတွက်အကျိုးစီးပွား၏အဓိက fMRI ရလဒ်များ Basal ganglia (NACC, caudate, putamen နှင့် globus pallidus) နှင့် rACC လေးခုအစိတ်အပိုင်းများထံမှထုတ်ယူဆုတ်ယုတ်ကိန်း (beta ကိုအလေး) တို့ဖြစ်သည်။1 ဤရွေ့ကား ROIs (ဖွဲ့စည်းပုံအလွန်အမင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောနေသော FreeSurfer ရဲ့အလိုအလျှောက် cortical နှင့် sub-cortical ကှကျ algorithms ကသတ်မှတ်နှင့်လက်စွဲစာအုပ်နည်းလမ်းများမှလိုလိုလားလားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်Desikan et al ။ , 2006; Fischl et al ။ , 2002; Fischl et al ။ , 2004) ။ တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူနှင့်ရွယ်များအတွက်, beta ကိုအလေးငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်၏ပေးပို့ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များနှင့်မျှ-ပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချက်များအတွက်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်ဆိုလို။ anhedonia အမှန်တကယ်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှု (ဖို့ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ရသောကြိုတင် neuroimaging အလုပ်နှင့်အတူကိုက်ညီမှုများ၏ဘို့အလိုငှါEpstein et al ။ , 2006; Harvey et al ။ , 2007; Keedwell et al ။ , 2005), fMRI ရလဒ်များမှတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်လေ့လာဆန်းစစ်။ အမည်မသိဝေဖန်သုံးသပ်သူ၏တောင်းဆိုချက်မှာ beta ကိုအလေးကိုလည်းဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ anhedonia ကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis သူတွေရဲ့စားသောက်နှိုင်းယှဉ် anticipatory အဆင့်တွေနဲ့ဆက်စပ်မှုများ၏တိကျသောအကဲဖြတ်ဖို့ဆုလာဘ်တွေကိုအဘို့ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်ဆိုလို။
FreeSurfer ရဲ့ algorithms လည်းတစ်ဦးချင်းစီရွယ်နှင့်စုစုပေါင်း intracranial volume အတှကျထုထည်ကြီးမားသောသတင်းအချက်အလက်များသည်။ , ကျားမနှင့် intracranial volume အတှကျကျနော်တို့ကိုထိန်းညှိဖို့ zလိင်အတွင်း intracranial အသံအတိုးအကျယ်နှင့် ROIs ၏တစ်ဦးချင်းစီ၏ volumes ကို -standardized ထို့နောက် regressed zယင်းအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီရွယ်များအတွက် -scores zintracranial volume အတှကျ -scores ။ ဤသည်ဆုတ်ယုတ်ချဉ်းကပ်အမျိုးသမီးမှဆွေမျိုးယောက်ျားအတွက်ပိုကြီး intracranial အသံအတိုးအကျယ်ကြောင့်လိင်ကွဲပြားမှုမိတ်ဆက်ရှောင်ရှားရန်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါထုထည်ကြီးမားသော variable တွေကိုအဘို့အားလုံးစာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ဤ Regression မှဆင်းသက်လာသည့်အကြွင်းအကျန်တွေနဲ့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
fMRI data တွေကိုသုံးပြီးရောထွေး ANOVAs နှင့်အတူဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် တုံ့ပြန်ချက် (အမြတ်မရှိ-ပြောင်းလဲမှု, ပင်နယ်တီ) နှင့် ကျား အချက်များအဖြစ် (အမျိုးသမီးအထီး,) ။ Basal ganglia ဒေသများအဘို့, ကမ်ာဘလုံးခွမျး (လက်ဝဲ, လက်ယာ) နှင့် ဒေသ (NACC, caudate, putamen, pallidus) အပိုဆောင်းအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်များအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖန်လုံအိမ်-Geisser ဆုံးမခြင်းသည့်အခါသက်ဆိုင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Pearson ဆက်စပ်မှုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်အဓိကယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ မှီခိုဆက်စပ်မှုကိန်းများအကြားကွာခြားချက်များအားဖြင့်အဆိုပြုထားသည့်ဖော်မြူလာကို အသုံးပြု. စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြ Steiger (1980)။ မဟုတ်ရင်မှတ်ချက်ချမဟုတ်လျှင်ရလဒ်များ 0.05 တစ်ခု alpha-Level (Two-tailed) နဲ့အစီရင်ခံရသည်။ ကြိုတင်တွေ့ရှိချက်များအလငျး၌ (Epstein et al ။ , 2006; Harvey et al ။ , 2007), ပု တစ်ဦး anhedonia နှင့် (1) NACC အသံအတိုးအကျယ်နှင့်ဆုလာဘ်မှ (2) NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှု၏ယူဆချက်တအမြီးကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ မူလတန်းပါဝင်ပတ်သက်လေ့လာဆန်းစစ်ငါးခုဆက်စပ်ဟောကိန်းထုတ် (anhedonia-NACC အသံအတိုးအကျယ်, အကျိုးအမြတ်မှ anhedonia-NACC တုံ့ပြန်မှု, အကျိုးအမြတ်မှ anhedonia-rACC တုံ့ပြန်မှု, anhedonia-အနားယူ rACC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှု, လာဘ်-အနားယူ rACC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုမှ NACC တုံ့ပြန်မှု) ။ ရှိသမျှသည်အခြားသောဆက်စပ်မှုငါးအဓိကတွေ့ရှိချက်များ၏တိကျသောစမ်းသပ်နိုင်ရန်အတွက်ဖျော်ဖြေကြသည် ဟူ. ၎င်း, အကျိုးဆက်မျိုးစုံစမ်းသပ်ဘို့ပြင်ဆင်ချက်အကောင်အထည်ဖော်မခံခဲ့ရပါ။
MASQ နှင့် PANAS အကြေးခွံများ Intercorrelations
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 1အဆိုပါ MASQ အကြေးမြင့်မားတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့် PANAS ပြည်နယ်အနုတ်လက္ခဏာနှစ်မျိုးလုံးအစည်းအဝေးများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေဆက်နွယ်နေကြောင်းမှအတန်အသင့်ရှိကြ၏။ သို့သျောလညျး, (ကြိုတင်လေ့လာတွေ့ရှိချက် mirroringWatson နဲ့ Clark က, 1995), သာ MASQ အေဒီ PANAS ပြည်နယ်အပြုသဘောနှင့်အတူသိသိသာသာနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးအစည်းအဝေးများမှာအကျိုးသက်ရောက်စေဖော်ပြပေး။ ဆိုလိုခြင်းနှင့် MASQ အေဒီ (ကျား, မများကမာန်တင်း) ၏စံသွေဖည်ခြင်းဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်တန်ဖိုးများကှာခွားဘူး Watson ဟာ et al ။ (1995, စားပွဲတင် 1) တစ်ဦးကြီးများကျောင်းသားနမူနာအဘို့, t(1112) = 1.28, p = .20, F(40, 1072) = 1.07, p = .35 ။
MASQ ကြေးခွံနှင့်ပြည်နယ်အပြုသဘောဆောင်သောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကြားတွင် Intercorrelations အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု
ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Gain နှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှ Basal Ganglia နှင့် rACC တုံ့ပြန်ချက်
အဆိုပါ Basal ganglia ယင်းလယ်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အားဖြင့် activated ခဲ့အတည်ပြုရန်ကျနော်တို့တွက်ချက် တုံ့ပြန်ချက် × ဒေသ × ကမ်ာဘလုံးခွမျး × ကျား ANOVA ။ တွေ့ရှိချက်တစ်ခုသိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှား တုံ့ပြန်ချက်, F(2, 51.5) = 8.00, p = .001 နှင့်သိသိသာသာ တုံ့ပြန်ချက် × ဒေသ အပြန်အလှန်, F(3.3, 85.6) = 6.97, p = .0003 (ကြည့်ရှု ပုံ 2A). တစ်ဦးကဦး သတ်မှတ်ထားသောထူးခွားသညျ့အားလုံး Basal ganglia ဒေသများမပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချက်နှိုင်းယှဉ်အကျိုးအမြတ်အားဖြင့်ပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် activated ခဲ့ထင်ရှား, F(1, 26) ≥ 4.43, p .045 ≤။ အထူးသ, ကိုသာ NACC ဆွေမျိုးမပြောင်းလဲမှုကိုတုန့်ပြန်ချက်မှပြစ်ဒဏ်များပြီးနောက်လျှော့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ပါတယ်, F(1, 26) = 3.83, p = .06 ။ ထို့ကြောင့် hemisphere နှင့်ကျား, မတစ်လျှောက်, အ Basal ganglia ယုံကြည်စိတ်ချရသောအကျိုးအမြတ်အားဖြင့် activated ခဲ့ပါတယ်နှင့်သာ NACC မပြောင်းလဲမှုကိုတုန့်ပြန်ချက်မှဆွေမျိုးပြစ်ဒဏ်များပြီးနောက် Deactivate လက္ခဏာပြသသည်။
(အတွင်း beta ကိုအလေး (နှင့်စံအမှားများ) ကိုဆိုလိုတာA) အလေး Basal ganglia ဒေသများနှင့် (B) ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် rACC မရှိ-ပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချက်များနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များ () hemisphere ဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ။ သာနျူကလိယ accumbens (NACC) ပြသသတိပြုပါ ...
ဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ် rACC ရွယ်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်အားဖြင့် activated ခံခဲ့ရခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးတွက်ချက် တုံ့ပြန်ချက် × ကျား ANOVA နှင့်တစ်ဦးသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိသော တုံ့ပြန်ချက်, F(1.9, 50.4) = 5.63, p <.007 (ပုံ 2B). တစ်ဦးကဦး သတ်မှတ်ထားသောထူးခွားသညျ့အဘယ်သူမျှမ-ပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချက်နှိုင်းယှဉ်အကျိုးအမြတ်မှပိုမိုမြင့်မား activation ထင်ရှား, F(1, 26) = 12.48, p = .002 အဖြစ်မပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချက်နှိုင်းယှဉ်ပြစ်ဒဏ်များမှပိုမိုမြင့်မား activation, F(1, 26) = 4.18, p = .051 ။
Anhedonia ၏ functional နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆက်စပ်မှု
အကျိုးအမြတ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်များမှ NACC တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး
တွေးဆသည်အတိုင်း, MASQ အေဒီဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် anhedonia အဆိုးအကျိုးအမြတ်မှ NACC တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နှစ်ခု hemisphere ဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ r(26) = -.43, p တဦးတည်း-Tails = .011, (ကြည့်ရှု စားပွဲတင်2နှင့် ပုံ 3A) ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆက်စပ်အကျိုးစီးပွား (putamen, caudate, pallidus, rACC) ၏အခြားလေးယောက်ဒေသမဆို MASQ အေဒီနှင့်အမြတ်-related တုံ့ပြန်မှုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏တိကျသောမီးမောင်းထိုးပြ, လာဘ်ဖို့ NACC တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့သိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းအခြား MASQ အကြေးခွံအဘယ်သူအားမျှ (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 2), နှင့် MASQ အေဒီနှင့် NACC အမြတ်တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှု, တစ်ပြိုင်နက်အခြားသုံး MASQ အကြေးခွံထွက် partialling ပြီးနောက်နီးပါးမပြောင်းလဲရှိနေဆဲ r(23) = -.35, p = .041, One-Tails ။ ထို့အပြင်အကျိုးအမြတ်မှ MASQ အေဒီနှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှု, MASQ အေဒီနှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှ NACC တုံ့ပြန်မှုအကြား (Non-သိသိသာသာ) ဆက်စပ်မှုကနေသိသိသာသာကွဲပြား r(26) = .25, p = .20, z = 2.41, p = .016, သို့မဟုတ်လုံးဝမ-ပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချက်, r(26) = .11, p = .58, z = 2.30, p = .021 ။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုတစ်ခုအဓိကအာရုံစိုက်, ပြစ်ဒဏ်များမှ NACC တုံ့ပြန်မှုအပြုသဘော MASQ GDA ရမှတ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့် (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 2), ပိုပြီးစိုးရိမ်သင်တန်းသားများကိုပြစ်ဒဏ်များမှအားကောင်း NACC တုံ့ပြန်မှုပြညွှန်ပြ။2
အဆိုပါဆက်စပ်မှုတို့အတွက် Scatterplots (A) အ Mood နှင့်တော့ပူပန်လက္ခဏာတွေမေးခွန်းလွှာ (MASQ အေဒီ) နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်ဖို့ NACC တုံ့ပြန်မှုများ၏ Anhedonic စီးပွားပျက်ကပ်စကေး (အကြားB) MASQ အေဒီနှင့်ကျား, မများနှင့် intracranial volume အတှကျတညျ့ NACC အသံအတိုးအကျယ်အကြား ...
MASQ တုံ့ပြန်ချက်မှအကြေးခွံ, နျူကလိယ Accumbens (NACC) Volume ကိုနှင့်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် Rostral anterior Cingulate နေရာများအတွက်နားခိုရာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်အကြားဆက်စပ်မှု
တွေကိုဆုချမှတုံ့ပြန်မှုကိုဆန်းစစ်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုဟာ NACC များအတွက် MASQ အေဒီနှင့်အတူမည်သည့်သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုထုတ်ဖေါ်မ r(26) = .12, p = .54, ဒါမှမဟုတ်အခြားလေး ROIs မဆို, |r(26) | ≤ .25, p ≥ .20 ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အကျိုးအမြတ်မှ MASQ အေဒီနှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှုတွေကိုဆုချမှ NACC တုံ့ပြန်မှုပါဝငျသောဆက်စပ်မှုထက်သိသိသာသာအားကောင်းခဲ့တယ်, z = 2.03, p = .04, ထိုအသင်းအဖွဲ့မဟုတ်ဘဲမျှော်လင့်သည်ထက်စားသုံးမှုဆုချဖို့တိကျတဲ့ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
NACC အသံအတိုးအကျယ်နှင့်အတူ relationship
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင်2နှင့် ပုံ 3B, MASQ အေဒီ, တစ်ပြိုင်နက်အခြားသုံး MASQ အကြေးခွံထွက် partialling ပြီးနောက်သိသာကြွင်းသော (ကျား, မများနှင့် intracranial volume အတှကျချိန်ညှိ) NACC အသံအတိုးအကျယ်နဲ့အနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်ခင်းကျင်းပြသ r(23) = -.38, p = .03, One-Tails ။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့များ MASQ အေဒီနှင့်အခြား Basal ganglia ဒေသများ, .22 ≥များ၏ချိန်ညှိ volumes ကိုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် r(26) ≥ .02, p≥ .27 ့။ ထိုမှတပါး, အကျိုးအမြတ်မှ NACC အသံအတိုးအကျယ်နှင့် NACC ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု (uncorrelated ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 2), နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ variable (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) MASQ အေဒီကှဲလှဲ၏သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းပြခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။
ကျိန်းဝပ် EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့်အတူ relationship
MASQ အေဒီနှင့် log-အသွင်ပြောင်းမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြား voxel-by-voxel ဆက်စပ်မှု၏ကွန်ပျူတာမှာသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှု၏တစ်ဦးတည်းသာစပျစ်သီးပြွတ်ဖော်ထုတ် p <0.001. မှာပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံ 1, ဒီ function ကိုသတ်မှတ်ရွယ် (16 တဆက်တည်း voxels, 5.49 စင်တီမီတာ3) anhedonia နှင့်ပျော်မွေ့ ratings ၏ fMRI လေ့လာမှုများကနေပေါ်ထွက်လာဒေသများနှင့်အတူထပ် rACC ဒေသများတွင်တည်ရှိသောခဲ့သည်။ ထို့အပွငျ MASQ အေဒီအပြုသဘောသုံးယောက်အသီးအသီးအတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအနားယူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် တစ်ဦး အဆိုပါ ACC (BAs 24, 25 နှင့် 32 ၏အကျိုးသက်ရောက်စေ subdivisions သတ်မှတ်; တွေ့မြင် ပုံ 3C နှင့် စားပွဲတင် 2).
ထိန်းချုပ်ရေးစမ်းသပ်မှုဒီတွေ့ရှိချက်သိသိသာသာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့ညွှန်ပြ။ ပထမဦးစွာ MASQ အေဒီရမှတ် (ပို dorsal အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့်အတူ ACC ၏သိမြင်မှု subdivisions မပတျသကျဘူးrဒေသ-specific မီးမောင်းထိုးပြ s ကိုအသီးသီး = .12 နှင့် .04 BA24 များအတွက် 'နှင့် BA32') ။ ဒုတိယအချက်မှာ MASQ အေဒီနှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားအားလုံးသိသာဆက်စပ်မှုမှာပြသထားတဲ့ စားပွဲတင်2, တစ်ပြိုင်နက်အခြားသုံး MASQ အကြေးခွံထွက် partialling ပြီးနောက်သိသာကျန်ရစ် r(36) ≥ .33, p ≤ .042, လက္ခဏာ-specific အလေးပေး။ ဆနျ့ကငျြ, MASQ GDD နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် BA32 အတွက်လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် function သတ်မှတ်ရွယ်များအကြားဆက်စပ်မှု (ကြည့်ရှု စားပွဲတင် 2) MASQ အေဒီထွက် partialling ပြီးနောက်မရှိတော့သိသာတည်ကြသည် ဖြစ်. , r(38) = ။ 09 ။ ထို့အပြင် MASQ AD-မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆဆက်စပ်မှု, တစ်ပြိုင်နက် MASQ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် EEG မှတ်တမ်းတင်နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းထိခိုက်စေအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောပြည်နယ်၏သင်တန်းသားများကို '' ratings ထွက် partialling ပြီးနောက်သိသာကျန်ရစ် r(33) ≥ .39, p အဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိအသင်းအဖွဲ့များစမ်းသပ်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းအကျိုးသက်ရောက်စေပြည်နယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေမခံခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြု≤ .021 ။3 တွေးဆအဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့, MASQ အေဒီရမှတ်များနှင့်သင်္ချိုင်း EEG လှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့များမြစ်ဝကျွန်းပေါ်တီးဝိုင်းများအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးခဲ့ကြသည်။4
ရရှိနားခိုရာ EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိ Density နှင့် NACC တုံ့ပြန်ချက်အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 2, NACC အကျိုးအမြတ်မှတုံ့ပြန်မှု, ဒါပေမယ့်ပြစ်ဒဏ်များ, အဆိုး function ကိုသတ်မှတ်ရွယ်နှင့်ရောမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်မဟုတ် တစ်ဦး rACC subdivisions သတ်မှတ်ပါတယ်, rs ကို (26) ≤ -.41, p≤ .031 ့။ ထို့ပြင်ဤဆက်စပ်မှု (1.60 ကွဲပြား≤ z ≤ 2.62, p ဖြစ်စေပြစ်ဒဏ်များမှ NACC တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အလားတူဆက်စပ်မှုကနေ≤ .11), rs ကို (26) ≤ .16, ps ကို≥ .42, သို့မဟုတ်လုံးဝမမက်လုံးပေးတုံ့ပြန်ချက်, rs ကို (26) ≤ .07, p≥ .71 ့။ လာဘ်ဖို့ rACC နှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုအတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအနားယူအကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏တိကျသောအလေးပေးမျှဆက်စပ်မှုဟာ rACC အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်အခြား Basal ganglia ဒေသများသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုမဆိုအတွက်အကျိုးအမြတ်မှဖြစ်စေတုံ့ပြန်မှုဟာ NACC အတွက်တွေကိုဆုချမှ ။
ကျား, မများနှင့်ဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်၏အလားအလာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့အ controls
အားလုံးသိသိသာသာဆက်စပ်အတွက် စားပွဲတင်2(အနည်းဆုံးဆိုနိုင်သည်သိသိသာသာကျန်ရစ်p အားလုံး variable တွေကိုပထမဦးဆုံးကျားအတွင်းစံခဲ့ကြသည်များနှင့်အစား Pearson ရဲ့ဆက်စပ်မှု၏ Spearman ရဲ့ရာထူးဆက်စပ်မှုတွက်ချက်ကြသောအခါ≤ .05,-tailed တဦးတည်း) ။ ထို့ကြောင့်မကျားမကွဲပြားခြားနားမှုမရှိသလိုဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့များမောင်းနှင်ခဲ့ကြသည်။ အတွက်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များ၏အပြင်, အဘယ်သူအားမျှ စားပွဲတင်2သိသိသာသာအလားတူဆက်စပ်မှုယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ရှုလေ့လာခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြ, ကျား, မများကတည်းဖြတ်ပေးခဲ့သည်။
Multivariate မော်ဒယ် Anhedonia ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း
anhedonia ဖို့အမျိုးမျိုးသောဇီဝကမ္မ variable တွေကို၏ထူးခြားသောနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပံ့ပိုးမှုများကိုအကဲဖြတ်ဖို့, အကျိုးအမြတ်မှ NACC တုံ့ပြန်မှု, NACC အသံအတိုးအကျယ်ကို၎င်း, rACC (functional ဖြစ်စေရွယ်) တွင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအနားယူတစ်ပြိုင်နက် MASQ ရမှတ်ခန့်မှန်းတဲ့မျိုးစုံဆုတ်ယုတ်ဝင်ခဲ့ကြသည်။ : တွေ့ရှိချက်အားလုံးသုံး variable တွေကို anhedonia ၏သိသာထင်ရှားသောခန့်မှန်း (လာဘ်မှ NACC တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား beta ကို = -.30, p = .05, One-Tails; NACC အသံအတိုးအကျယ်: beta ကို = -.43, p = .005, One-Tails; မြစ်ဝကျွန်းပေါ် rACC လက်ရှိသိပ်သည်းဆအနားယူ: beta ကို = .37, p = Two-Tails .024,) ။ ထို့ကြောင့်သုံးခု variable တွေကိုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့ MASQ အေဒီကှဲလှဲ၏အစိတ်အပိုင်းများအလုပ်လုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုအစီအမံများအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့ရှိနေသော်လည်းကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွတ်လပ်သောခဲ့ကြသည်။ အထူးသ, စံပြ anhedonic လက္ခဏာတွေအတွက်ကှဲလှဲ၏ 45% ကရှင်းပြသည်, R2 = .45, F(3, 24) = 6.44, p = .002 ။
ဒီလေ့လာမှုက, anhedonia ၏အာရုံကြောဆက်စပ်ဖော်ထုတ်ရန် EEG, အခြေခံအဆောက်အဦး MRI နှင့် fMRI အနားယူစိတ်ရောဂါမမှန် (ဥပမာများအတွက်အရေးပါသော endophenotype နှင့်အားနည်းချက်အချက်ပေါင်းစည်း ကောင်းသော et al ။ , 2005; Hasler et al ။ , 2004; Loas, 1996; Pizzagalli et al ။ , 2005) ။ တွေးဆအမျှကျနော်တို့ (1) anhedonia နှင့် EEG အနားယူအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ (2), တုံ့ပြန်ချက် (ဆိုလိုသည်မှာ, ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်) ဆုချမှ (3) anhedonia နှင့် NACC အသံအတိုးအကျယ်အကြားတစ်ဦးကအနုတ်အသင်းအဖွဲ့ anhedonia နှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုများအကြားတစ်ဦးကအနုတ်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာတွေ့ရှိနှင့် rACC အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှု (ဆိုလိုသည်မှာအနိမ့်ကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှု) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ဆန့်ကျင်, တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် anhedonia ဆုချမှ rACC activation အကြားမျှဆက်စပ်မှုပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ သို့သော် rACC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအနားယူအပျက်သဘောအားဖြင့်အကြံပြုအဖြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရစ်သမ်အမှန်ပင်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်ဆားကစ်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှု-ရူးနှမ်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ, အကျိုးအမြတ်မှ NACC တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် Knyazev (2007)။ ထို့ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ဦးနှောက် anhedonia နှင့်ဆက်စပ်ယန္တရားများနှင့် EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်စပ်မှုနှစ်ဦးစလုံးသို့ဝတ္ထုထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။
Anhedonia နှင့် NACC ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ရာထူးအမည်
(ကြိုတင်အလုပ်ပုံတူEpstein et al ။ , 2006; Keedwell et al ။ , 2005), ကျနော်တို့ပျှမ်းမျှထက်ပိုတစ်လအကြာမှာအပေါ်သီးခြား session ကို () မှာတိုင်းတာ anhedonic ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှု (ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်) အား NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများနှင့်မတူဘဲလက်ရှိဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတုံ့ပြန်ချက်ဆုချဖို့, (ထိုသုံးဦးသည်အခြား Basal ganglia ဒေသများနှိုင်းယှဉ်) ကို NACC ရန်, (ထိုသုံးမျိုးသည်အခြား MASQ အကြေးခွံများကအကဲဖြတ်အဖြစ်, စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါလက္ခဏာသို့မဟုတ်ယေဘုယျဒုက္ခဆင်းရဲနှိုင်းယှဉ်) ဒီအသင်းအဖွဲ့ anhedonic ရောဂါလက္ခဏာတွေမှတိကျတဲ့ခဲ့ကြောင်းထင်ရှား (ပြစ်ဒဏ်နှင့်ကြားနေတုံ့ပြန်ချက်နှိုင်းယှဉ်), နှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ consumatory (anticipatory နှိုင်းယှဉ်) အဆင့်မှ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် (anhedonia စိတ်ဓာတ်လူနာအတွက်သာအကျိုးဖြစ်ထွန်းလှုံ့ဆော်မှုမှ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်းကြောင်းကိုပြသEpstein et al ။ , 2006; Keedwell et al ။ , 2005), ဒါပေမယ့်လည်းကျန်းမာဘာသာရပ်များ၌၎င်း, ဆုလာဘ်-related NACC တုံ့ပြန်မှုများနှင့် anhedonia အကြားသိသိသာသာတိကျတဲ့အလေးပေး။ ဒီအသင်းအဖွဲ့အခြေခံသည့်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခသို့ကနဦးအသိအမြင်များကို Schlaepfer et al ။ (2008) မကြာသေးမီက NACC အတွက်နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွစိတ်ကျရောဂါကုသယဉ်ပုံစံများနှင့်အတူသုံးလူနာအတွက်နှိုးဆွဒေသနှင့်များလျော့ကျ anhedonia အတွက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကတော့ NACC အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန် anhedonia တို့၏ပေါ်ထွန်းခြင်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပုံတူတွေ့ရှိချက်များက Harvey et al ။ (2007)ကျနော်တို့ကိုလည်း MASQ အေဒီ (နှင့်မဟုတ်ဘဲအခြား MASQ အကြေးခွံ) နှင့် NACC အသံအတိုးအကျယ်အကြားတိကျသောအနှုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့လေ့လာသည်။ ကြိုတင်လေ့လာမှုမတူဘဲ, ဒီအသင်းအဖွဲ့ NACC မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကြီးနှင့်အခြား Basal ganglia ဒေသများ (ဥပမာ caudate) အားတိုးချဲ့ဘဲနေ၏။ စိတ်ဝင်စားစရာ anhedonia အတွက်ကှဲလှဲအကျိုးအမြတ်မှ NACC တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကှဲလှဲနှင့်အတူမထပ်ခဲ့ပါ NACC အတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာကွဲပြားမှုအားဖြင့်အဘို့မှတ်။ ဒါကအခြေခံအဆောက်အဦးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကှဲလှဲကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ်ပေါက် ရို anhedonia, အအလုပ်လုပ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းအကြီးအကျယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစေခြင်းငှါသော်လည်း ပြည်နယ် anhedonia ။ အနည်းဆုံးနှစ်ခုကိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေဆန့်ကျင်ဟောပြောလော့။ ပထမဦးစွာမက်လုံးပေးဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုဟာ MASQ အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရသောကွဲပြားခြားနားသော session တစ်ခုမှာတစ်လထက်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပိုပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာတည်ငြိမ်ရေးကိုသာစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအသင်းအဖွဲ့များအခြေခံနိုင်ဘူး။ ဒုတိယအချက်အကျွန်ုပ်တို့သည်အမူအကျင့်များနှင့် EEG အစည်းအဝေးများဖြတ်ပြီး MASQ အေဒီရမှတ်ပျမ်းမျှပြီးနောက်ဆက်စပ်မှု-တွက်ချက်ပြန်လည်။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအကျိုးအမြတ်မှ NACC တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုတိုးလာဆက်စပ်ထင်ရှား, r(26) = -.49, ဒါပေမယ့်မရ NACC အသံအတိုးအကျယ်အဘို့, r(26) = -.20 (မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးများကိုနှိုင်းယှဉ် စားပွဲတင် 2) ။ အကျိုးဆက်က NACC အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုမည်သို့ပင်ဆိုစေနှစ်ခုလုံး anhedonia မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်မည်အကြောင်းအာရုံကြောဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်သို့အသာပုတ်ပါပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ပုံရသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ကဤသီးခြားရှုထောင့်ကိုအတိအကျရှာရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်နောက်ထပ်အလုပ် anhedonia မှဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏နှိုင်းယှဉ် anticipatory သူတွေရဲ့စားသောက်ရှုထောင့်ရဲ့ဆွေမျိုးပံ့ပိုးမှုများကိုပြိုကွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ (NACC opioid လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် NACC dopamine ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်မက်လုံးပေး salience မှချည်ထားသောခံရဖို့ပုံပေါ်သော်လည်း ( "လို") နှင့်အမူအကျင့်ကို Activation "like နှိပ်" hedonic တိရိစ္ဆာန်အလုပ်အတွက်Berridge, 2007; Salamone et al ။ , 2007) နှင့် "ကဲ့သို့" နှင့်ပွဲတစ်ပွဲ anhedonia အတွက်ကိုလျှော့ချမည်အကြောင်းတည်း "လို" နှစ်ဦးစလုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာမှာတော့ anhedonia နှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှုမဟုတ်ဘဲဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ anticipatory ( "လို") အဆင့်ထက်သူတွေရဲ့စားသောက် ( "အကြိုက်") မှတိကျတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (anhedonia အပါအဝင်) အနုတ်လက္ခဏာရောဂါလက္ခဏာတွေဟာလယ်လုပ်ငန်းတာဝန် (တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူဗားရှင်း anticipatory တွေကိုမှ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြရသော, schizophrenic လူနာအတွက်မကြာသေးမီကဒေတာတွေနဲ့ခြားနားJuckel et al ။ , 2006a, 2006b) ။ အုပ်စုတစ်စုဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု (Psychiatric ကျန်းမာဘာသာရပ်များ vs. schizophrenia နှင့်အတူလူနာ) ကိုရှင်းလင်းအပြင်, အလုပ်တခုကိုဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားမှုလက်ရှိနှင့် Juckel ရဲ့တွေ့ရှိချက်များအကြားကွာဟမှုကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ အထူးကြိုတင်လေ့လာမှုများမတူဘဲရသောဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ 66% (တုံ့ပြန်ချက်ဆုချမှဦးဆောင်Juckel et al ။ , 2006a, 2006b), လက်ရှိလေ့လာမှုအတွက်အကျိုးအမြတ်ဆုလာဘ်စမ်းသပ်မှုတွေ၏ 50% အပေါ်အပ်လျက်, အရှင်ပိုပြီးခန့်မှန်းရခက်ကြ၏။ ဆုလာဘ်, ဥပမာ (ခန့်မှန်းရခက်သည့်အခါ striatal တုံ့ပြန်မှုလုပျသငျဖွစျဖို့တွေ့ပါပြီကြောင့်, Delgado, 2007; O'Doherty et al ။ , 2004), လက်ရှိဒီဇိုင်းကဒီစိတ်ရောဂါကျန်းမာနမူနာအတွက် NACC အကျိုးအမြတ်မှတုံ့ပြန်မှုများနှင့် anhedonia အကြားအေပျအသင်းအဖွဲ့များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ထိုအကှာဟအပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့ကအဖျား anhedonia အဓိကအားဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့် vs. anticipatory အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိဖော်ပြနိုင်ဖို့အချိန်မတန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ဆဲတာဝန်များကိုနှင့် / သို့မဟုတ် dopamine ၏ pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် opioid စနစ်များအမျိုးမျိုးသုံးပြီးအနာဂတ်လေ့လာမှုများ "လို" နှင့် anhedonia ထဲမှာ "အကြိုက်" ၏အခန်းကဏ္ဍ elucidate ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
Anhedonia နှင့် rACC ရာထူးအမည်
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ anhedonia နှင့် rACC ဒေသများတွင် EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအနားယူအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤသည်အသင်းအဖွဲ့ (ထို theta တီးဝိုင်းအလားတူပေမယ့်အားနည်းဆက်စပ်မှု၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ;4အောက်ခြေမှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ) (အခြား MASQ subscores နှိုင်းယှဉ်), rostral မှ (dorsal သာရှိပြီးပြည်ပမှပိုမိုသိမြင်မှု) ACC ငျဒသေ, နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်အကြိမ်ရေတီးဝိုင်းမှ anhedonia မှတိကျတဲ့ခဲ့သည် ။ ထို့ပြင်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆနှင့် anhedonia အကြားအပြင်းထန်ဆုံးဆက်စပ်မှုဖေါ်ပြခြင်းသီးပြွတ် (သာယာသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် anhedonia / စိတ်ကျရောဂါနှင့် fMRI signal ကိုအကြားဆက်စပ်မှုကြိုတင်အလုပ်အတွက်တွေ့ပါပြီရှိရာဒေသများနှင့်အတူဥပမာထပ်နေသည်, Harvey et al ။ , 2007; Keedwell et al ။ , 2005) ။ အနားယူမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှိုပြောင်းပြန် (တစ်ဦးချင်းစီကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအနားယူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ကြောင်းပေးထားNiedermeyer, 1993; Pizzagalli et al ။ , 2004; Reddy et al ။ , 1992; Scheeringa et al ။ , 2008), ယင်းတွေ့ရှိချက် (anhedonia လုပ်သူများနှင့်ဆက်နွယ်သောအယူအဆအမျိုးမျိုးကိုပုံစံများထံမှလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါး ratings နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်သောဦးနှောက်၏ဧရိယာအတွင်းကဦးနှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့ကျကိုထောကျပံ့က de Araujo et al ။ , 2003; Grabenhorst et al ။ , 2008; Rolls et al ။ , 2008; Rolls et al ။ , 2003) ။ ထို့အပြင်က subgenual ACC (BA25) တွင် anhedonia နှင့်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာရေးအတွက်တစ်ဦးရွယ်ပိုမိုမြင့်မားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆ (နှင့်အောက်ပိုင်းဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု) ၏ကြိုတင်တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့အံကြင်လေ့လာဆန်းစစ်ရာမှပေါ်ထွက်လာကြောင်းကိုလည်းမှတ်သားရပါမည် melancholia နှင့်အတူစိတ်ကျရောဂါလူနာ BA25 အတွက် (ဆိုလိုသည်မှာအဓိကစိတ်ကျရောဂါတစ်ခုမျိုးကွဲအဓိက anhedonia ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, Pizzagalli et al ။ , 2004).
အတူတူယူ, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် (1) မဟုတ်ဘဲယေဘုယျဒုက္ခဆင်းရဲ, စိုးရိမ်စိတ်များသို့မဟုတ်အခြားစရိုက်များထက် anhedonia နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက်ခြီးမွှောကျကဤသို့ဆို၏, ပြောင်းလဲ rACC အတွက် functioning ဦးနှောက်နှင့် (2) ချိတ်ဆက်စေခြင်းငှါညွှန်ပြ anhedonia ဖြစ်နိုင်သည်သာကြောင်းအကြံပြု ဆုလာဘ်မှ, ဒါပေမယ့်လည်း rACC အတွက်လုပ်သူများအနိမ့်ကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချ NACC response ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ အဆုံးစွန်သောလေ့လာရေးဝတ္ထုပေမယ် rACC ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry အတွက်အဓိကကိန်းဂဏန်းများကြောင့်လုံလောက်သောသက်သေအထောက်အထားနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒါဟာ (သိပ်သည်း dopaminergic innervation အားလက်ခံတွေ့ဆုံGaspar et al ။ , 1989) နှင့် striatum မှစီမံကိန်းများကို (အထူးသဖြင့်အတွင်း NACC) နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ (Haber et al ။ , 2006; Öngürနှင့်စျေး, 2000; Sesack နှင့် Pickel, 1992) ။ ကြွက်များတွင်, rACC တိုး၏ဆွ (ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ပုံစံများပြင်းစွာတိုက်Gariano နှင့်အာရှရပင်, 1988; Murase et al ။ , 1993), နှင့်ဤပြင်းစွာတိုက်ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံများဟာ NACC အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့် (Schultz, 1998), အရာ (အထကျကိုကြည့်ပါ) မက်လုံးပေး salience နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ လူသားမြားသညျမှာ rACC (dopamine-inducing မူးယစ်ဆေးဝါးများတုံ့ပြန်လုပ်ဆောင်မှုတိုးပြသUdo က de Haes et al ။ , 2007; Völlm et al ။ , 2004dopamine ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက် striatal ဒေသများနှင့်အတူ), လျှော့ချ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (Nagano-Saito et al ။ , 2008ကုသမှု-ခံနိုင်ရည်စိတ်ကျရောဂါအတွက်), လျှော့ချဆုလာဘ်-သင်ယူခြင်းအချက်ပြမှုများ (Kumar က et al ။ , 2008) နှင့်ဥပမာ (ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု (အထကျကိုကြည့်ပါ) နှင့် preference ကိုတရားစီရင်ပိုင်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့ပြီး, Paulus နှင့်ဖရန့်, 2003).
ပြင်းထန်စွာသည် rACC လည်းဆိုလိုသည်မှာအပြန်အလှန်ဒေသကွန်ယက်အနားယူပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း activated နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းပိတ်ပြီး (ဦးနှောက်ရဲ့ default အနေနဲ့ကွန်ယက်၏အဓိက node ကိုစဉ်းစားသည်, Buckner et al ။ , 2008), နှင့် Scheeringa et al ။ (2008) တိုကျရိုကျ midline မြစ်ဝကျွန်းပေါ် / theta လှုပ်ရှားမှုပြောင်းပြန်ကို default ကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ Simulator - - သူတို့မရောက်မီလာမည့်ဖြစ်ရပ်များမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ဖို့နည်းလမ်းများကိုထို့ကြောင့်ဒီရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေး, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက် "ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် Self-သက်ဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စဉ်းစားသောက default ကွန်ရက်အတွက် anhedonia နှင့်လျှော့လှုပ်ရှားမှုအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အကြံပြု ဖြစ်ပျက် "(Buckner et al ။ , 2008, p ။ 2) ။ စိတ်ကျရောဂါလူနာဥပမာ (ထိုသူတို့အားပေးအပ်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဖြစ်ပျက်မှုလျှော့မတွက်, et al Pause ။ , 2003) နှင့်အနီးအနာဂတျမှာနည်းပါးလာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေမျှော်လင့် (MacLeod နှင့် Salaminiou, 2001; MacLeod et al ။ , 1997; Miranda နှင့် Mennin, 2007; Moore က et al ။ , 2006) ။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ကို default ကွန်ယက်၏ rACC node ကိုအတွက်ကျိန်းဝပ်လှုပ်ရှားမှုအပြုသဘောအနာဂတ်-oriented mentation (အနာဂတျအတှကျအပြုသဘောကးစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာလိုငွေပြမှုနှင့်အတူလွန်ခဲ့သည့်အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ဖြစ်ရပ်ဆိုလိုသည်မှာအထင်သေး) နဲ့အခက်အခဲအခြေခံဖြစ်နိုင်သည်လျှော့ချသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေမြှင့်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများဒီထင်ကြေးစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါ rACC ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်းဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ activated အဆိုပါလယ်လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ချက်များကကျနော်တို့ဆုလာဘ်ဒီဧရိယာထဲမှာတုံ့ပြန်မှုများနှင့် anhedonia အကြားမျှော်လင့်ထားသည့်အပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ (စောငျ့ရှောကျဘူးHarvey et al ။ , 2007; Keedwell et al ။ , 2005) ။ ကျွန်တော်တို့သည်သတိပြုပါသို့သော်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှ anhedonia / စိတ်ကျရောဂါနှင့် rACC တုံ့ပြန်မှုအကြားကြောင်းအပြုသဘောဆောင်အသင်းအဖွဲ့များခြုံငုံ rACC များ၏အခြေအနေတွင်အများဆုံးတသမတ်တည်းအစီရင်ခံခဲ့ကြ Deactivate အများဆုံးသိသာ Deactivate (ဖေါ်ပြခြင်း anhedonia အတွက်အနိမ့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှGotlib et al ။ , 2005; Grimm et al ။ , 2008; Harvey et al ။ , 2007) ။ ဒါဟာ anhedonic လက္ခဏာတွေနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကြွင်းသောအရာအောက်မှာကြောင့်ဤဒေသရှိ၎င်းတို့၏သညျ့အနိမ့်လှုပ်ရှားမှုမှဦးနှောက်ရဲ့ default အနေနဲ့ကွန်ယက်၏ဒီ node ကိုအတွက်တာဝန်-သွေးဆောင် Deactivate ဖော်ပြရန်မထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် anhedonia နှင့်အချို့သောလေ့လာမှုတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာ rACC ဆုလာဘ်တုံ့ပြန်မှု (အကြားထင်ရသောဝိရောဓိအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့များကိုရှင်းပြမယ်သောဤဝတ္ထုအယူအဆ,Harvey et al ။ , 2007; Keedwell et al ။ , 2005), အလွယ်တကူတာဝန်-related Deactivate ၏ fMRI အစီအမံများနှင့်သင်္ချိုင်းလှုပ်ရှားမှုပေသို့မဟုတ် EEG အစီအမံပေါင်းစပ်ပြီးလေ့လာမှုများအတွက်စုံစမ်းစေနိုင်ပါတယ်။
Rostral ACC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် NACC ဆုကြေးတုံ့ပြန်ချက်
ပို rostral အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားလေ့လာတွေ့ရှိအဆိုပါကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တိကျသောအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်ခြင်း, ACC နှင့်အကျိုးအမြတ်ဖို့ NACC တုံ့ပြန်မှုကိုထိခိုက် subdivisions အဆိုပါ EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရစ်သမ်ဟာ ventral striatum အတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်နွယ်သောအယူအဆများအတွက်ကျန်းမာလူသားတွေအတွက်ဝတ္ထုသက်သေအထောက်အထားတစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်း (Knyazev, 2007) ။ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု၏ညှနျကွား (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားတိရိစ္ဆာန်အချက်အလက်များကို NACC အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသရုပ်ပြနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Chang et al ။ , 1995; Ferger et al ။ , 1994; Kropf နှင့် Kuschinsky, 1993; Leung နှင့် Yim, 1993; Luoh et al ။ , 1994) နှင့် Pre-လက်ခဏာ Huntington ရဲ့ရောဂါအတွက်တိုးမြှင့်အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှု၏မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အစီရင်ခံစာအရ, striatal dopamine D1 အတွက်မှတ်သားလျှော့ချနှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အာရုံကြောရောဂါနှင့် D2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ (Best et al ။ , 2007) ။ rACC နှင့် NACC ဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှု၏တိကျသောအာရုံကြောဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်များအတွက်တွေးဆအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ထပ်မံပံ့ပိုးမှုရှိပါသည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, rACC (မျောက်အတွက်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuitry နှင့်ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှုများ၏အရေးပါသော node ကို rACC ဒေသများတွင်ဦးစားကိုအခြား striatal ဒေသများနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ NACC မှပရောဂျက်တစ်ခုကိုသရုပ်ပြကြသူ့ဟာသူဖြစ်ပါသည်Haber et al ။ , 2006) ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့်ဆုလာဘ်များအကြား link တစ်ခုအဘို့ခိုင်ခံ့သက်သေအထောက်အထားပေးသျောလညျး, EEG ဒေတာအနားယူရာမှလက်ရှိတွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုများ၏တိကျသောလုပ်ငန်းဆောင်တာမှမပြောတတ်ကြဘူး။ Cohen ကို, Elger နှင့်ကျဆင်းသွား (2008) မကြာသေးမီကတိုကျရိုကျ midline မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးမှုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းလျော့ကျကြောင်းအစီရင်ခံခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်မျှော်လင့်မထားတဲ့အနိုင်ရတုံ့ပြန်ချက်ငှါ, တုံ့ပြန်ချက်သူ့ဟာသူတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်တိုးအနိုင်ရပါပြီ။ ဤရွေ့ကားဒေတာဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ anticipatory နှင့်သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အပြောင်းအလဲများကိုအကြံပြုနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးအာရုံကြောဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဒိုင်းနမစ်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစုံစမ်းဖို့ EEG ၏သာလွန်ယာယီ resolution ကိုအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်နိုင်ပုံကိုညွှန်ပြ။
အပြင်တော်တော်များများအားသာချက် (ယခင်လေ့လာမှုများထက်မျိုးစုံ neuroimaging နည်းစနစ်, ပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစားဥပမာအသုံးပြုမှု) မှ, ငါတို့သည်လည်းအချို့သောအရေးကြီးသောန့်အသတ်ကိုသတိပြုပါသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာအဓိကအားငယ်ရွယ်တက္ကသိုလ်တွင်ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများပါဝင်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဦးစွာပြုလုပ်ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်သည်အခြားပိုမိုသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနမူနာဖို့ယဘေုယကြလိမ့်မည်ရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ anhedonia နှင့်သင်္ချိုင်း EEG အကြားလေ့လာအသင်းအဖွဲ့အပေါ်အလားအလာပြည်နယ်လွှမ်းမိုးမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်အများအပြားကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ (သီးခြားအစည်းအဝေးများမှာအကဲဖြတ်, ပြည်နယ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထိခိုက်) ကိုယူပေမယ့်ဒုတိယ, ကျနော်တို့ပြည်နယ်ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်မှလှူဒါန်းခဲ့ထိခိုက်စေသည်ဟုအထဲကအုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ EEG အနားယူ၏အထပ်ထပ်အကဲဖြတ်နှင့်အတူလေ့လာရေး (ပြည်နယ်များ၏ဆွေမျိုးအရေးပါမှုအပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့သတင်းအချက်အလက်များကို rACC မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကှဲလှဲရန်ပံ့ပိုးမှုများကိုစရိုက်များနိုင်Hagemann et al ။ , 2002) ။ လုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားနမူနာရှင်းရှင်းလင်းလင်း (အနိမ့်၏နားချင်းဆက်မှီကြောင်းပေးထား, ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြောင်းပြန်ညွှန်ပြချက်အတိုင်း rACC အတွက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၏ LORETA ခန့်မှန်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနက်ကိုအားကောင်းရန်မျက်ခြေမပြတ်နေကြတယ်အတွက် EEG နှင့်ပေအနားယူ၏တစ်ပြိုင်တည်းပါတိုင်းတာခြင်းနှင့်အတူတတိယလေ့လာမှုများ ) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်နှင့်ဒေသတွင်းဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်လက်တွေ့နမူနာ၌ရှိသကဲ့သို့တင်းကျပ်စွာမကျမည်အကြောင်း (Pizzagalli et al ။ , 2004) ။ မူလတန်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်စမ်းသပ်ပြီးငါးဆက်စပ်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ပေမယ့်, စတုတ္ထ တစ်ဦး ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်သီအိုရီအငြင်းပွားမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး, လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကြောင့်အများအပြားနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ဆုံးမခြင်း၏မရှိခြင်းပွားစောင့်ဆိုင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အားလုံးဆက်စပ်လေ့လာမှုများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ပစ္စုပ္ပန်တွေ့ရှိချက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်လမျးညှနျခဆိုလိုဘူး။ ထို့ကြောင့်သူကလျှော့ချ NACC အသံအတိုးအကျယ်, ဥပမာ, တစ်အားနည်းချက်အချက်သို့မဟုတ် anhedonia ၏အကျိုးဆက်သည်ဖြစ်စေလက်ရှိမသိနိုင်ပါဘူး။ longitudinal ဒီဇိုင်းများ, striatal နှင့် medial PFC လှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်ထိန်းသိမ်းရေး (ဥပမာ, ကို အသုံးပြု. အနာဂတ်လေ့လာမှုများ Schlaepfer et al ။ , 2008), နှင့် / သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇအပေါ်အာရုံစူးစိုက် (ဥပမာ, Kirsch et al ။ , 2006) anhedonia ၏ neurobiological အလွှာအကြောင်းပိုမိုသန့်စင်ပြီးအယူအဆစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, တစ်ဘက်စုံ neuroimaging ချဉ်းကပ်နည်းသုံးပြီးကျနော်တို့ anhedonia ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်မှအားနည်း NACC တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းပြလျှော့ချ NACC အသံအတိုးအကျယ်နှင့် EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုအနားယူတိုးမြှင့်ငယ်ရွယ်တဲ့နမူနာအတွက် rACC ဒေသများတွင် (ဆိုလိုသည်မှာ, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအနားယူလျှော့ချ) စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ စုပေါင်း, ဤသုံးပါးဇီဝကမ္မအစီအမံ anhedonic ရောဂါလက္ခဏာတွေကှဲလှဲ၏ 45% ကရှင်းပြသည်။ anhedonia နှင့်ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်၏ဒေသများတွင်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကျရောဂါနှင့် schizophrenia အပါအဝင်အများအပြားပြင်းထန်စိတ်ရောဂါမမှန်, ချိတ်ဆက်ပြီ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကဤပုံမမှန်များအတွက်အလားအလာ endophenotype နှင့်အားနည်းချက်အချက်အဖြစ် anhedonia ၏စိတ်ကူးများအတွက်ထပ်မံထောက်ခံမှုများကိုပေးစွမ်းကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက် anhedonia များ၏အာရုံကြောအခြေခံပေါ်မှာနောက်ထပ်လေ့လာမှုများလက်ရှိစိတ်ရောဂါ nosology ၏န့်အသတ်ကိုကျော်လွှားကူညီခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောပူဇော်စေခြင်းငှါအကြံပြု pathophysiology သို့ထိုးထွင်းသိမြင်။
ဤသုတေသနကို DAP မှချီးမြှင့်သော NIMH (R01 MH68376) နှင့် NCCAM (R21 AT002974) မှထောက်ပံ့မှုများရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများသည်စာရေးသူများ၏တာဝန်သာဖြစ်ပြီး NIMH, NCCAM သို့မဟုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏တရားဝင်အမြင်များကိုသေချာပေါက်ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ။ ဤသုတေသနနှင့်မသက်ဆိုင်သောစီမံကိန်းများအတွက် Dr.Pizzagalli သည် GlaxoSmithKline နှင့် Merck & Co. , Inc တို့၏သုတေသနအထောက်အပံ့ကိုရရှိခဲ့သည်။ Jan Wacker သည်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်စိတ်ပညာဌာန၌နေထိုင်စဉ် Biopsychologischer Methodik ရှိ G. -A. -Lienert-Stiftung zur Nachwuchsförderungထံမှထောက်ပံ့ငွေဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။
စာရေးသူအဘို့အဂျက်ဖရီ Birk နှင့်အယ်လီနာ Goetz သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်အကူအညီများ, Allison Jahn အဘို့, Kyle Ratner နှင့်ဂျိမ်းစ် O'Shea ဒီသုတေသန၏အစောပိုင်းအဆင့်မှာ၎င်းတို့၏အလှူငွေဘို့, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ Decklin Foster နှင့်နန်စီ Brooks နှင့်နာမည် Deveney ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် ဒီနမူနာ၏စုဆောင်းမှုမှာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို။
1တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့ anhedonia နှင့်လက်ဝဲအတွက်အပြုသဘောဆွဖို့ BOLD တုံ့ပြန်မှုများနှင့်ညာဘက် ventromedial PFC (အကြားအထွတ်အထိပ်ဆက်စပ်မှုများ၏ခန့်မှန်းတည်နေရာအပေါ်ဗဟိုပြုထားတဲ့ 8 မီလီမီတာအချင်းဝက်နှင့်အတူအလင်းဆုံ ROIs များအတွက်ပျမ်းမျှအား beta ကိုအလေးရရှိသောx = ± 8, y = 44, z = -7) ကအစီရင်ခံအဖြစ် Harvey et al ။ (2007) နှင့် Keedwell et al ။ (2005)။ အဆိုပါရလဒ်များ rACC ဒီမှာအစီရင်ခံသူတို့အားအလွန်ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။
2ဒီ link များ၏တိကျသောမီးမောင်းထိုးပြ, ဒီဆက်စပ်မှု, အကျိုးအမြတ်မှ MASQ GDA နှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားလေ့လာတွေ့ရှိ non-သိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့များထံမှကွဲပြား r(26) = -.19, p = .34, z = 2.07, p = .038 နှင့်မပြောင်းလဲမှုကိုတုန့်ပြန်ချက်, r(26) = -.00, p = .99, z = 1.71, p = .087 နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အခြားသုံး MASQ အကြေးခွံ partialling ပြီးနောက်သိသာကျန်ရစ်, r(23) = .41, p = .041 ။ ကဟောကိန်းထုတ်မခံခဲ့ရခြင်းနှင့်မျိုးစုံကိုစမ်းသပ်ဘို့ဆုံးမပဲ့ပြင်ပြီးနောက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုရောက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလားအလာတိကျတဲ့၏ကြားမှများတွင်ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များမှ MASQ GDA နှင့် NACC တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်စပ်မှု, သတိအနက်ရပါမည်။
3နှစ်ဦးကသင်တန်းသားများကို၎င်းတို့၏ပြည်နယ်၏အနည်းဆုံးအပြုသဘောအတွက် data တွေကိုပျောက်ဆုံးနှင့်အပျက်သဘော ratings ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ထည့်သွင်းလို့မရပါ။ ဖူး
4အလားတူပေမယ့်အတန်ငယ်သေးငယ်ဆက်စပ်မှု MASQ အေဒီရမှတ်များနှင့် theta လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားပေါ်ထွက်လာ, rs ကိုအသီးသီး BAs 39, 35 နှင့် 30 များအတွက် (45) = .24, .25 နှင့် .32, p .06 ≤။ ထိုမှတပါး, MASQ အေဒီနှင့် BA1 အတွက် beta32 လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားဆက်စပ်မှု၏တစ်ဦးတည်းသောချွင်းချက်နှင့်အတူ, r(39) = .33, p = .035 မရှိသိသာအသင်းအဖွဲ့များအခြား EEG frequency band မဆိုတွင်ဤဒေသများရှိ MASQ အေဒီနှင့်လက်ရှိသိပ်သည်းဆအကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
Berridge KC ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မက်လုံးပေး salience များအတွက်အမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 391-431 ။ [PubMed]
Berridge KC, Kringelbach ML ။ အပျော်အပါး၏အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်။ Psychopharmacology (Berl) 2008; 199: 457-480 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
preclinical Huntington ရဲ့ရောဂါအတွက် cortico-subcortical interaction ကအကောင်းဆုံးကို C, Saft ကို C, Yordanova J ကို, Andrich J ကို, ရွှေ R ကို, Falkenstein M က, Kolev V. Functional လျော်ကြေးငွေသို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒ? Neuropsychologia ။ 2007; 45: 2922-2930 ။ [PubMed]
Bogdan R ကို, Pizzagalli DA ။ acute စိတ်ဖိစီးမှုဆုလာဘ်တုန့်ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေ: စိတ်ကျရောဂါများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 60: 1147-1154 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Buckner RL, Andrews က-Hanna JR, Schacter DL ။ ဦးနှောက်ရဲ့ default အနေနဲ့ကွန်ယက်ကို: ခန္ဓာဗေဒ, function ကိုများနှင့်ရောဂါဆက်စပ်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2008; 1124: 1-38 ။ [PubMed]
သမ္မတဘုရ်ှက G, Luu P ကို, Posner MI ။ anterior cingulate cortex အတွက်သိမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2000; 4: 215-222 ။ [PubMed]
Chang-AY, Kuo ကတီဘီ, Tsai TH, Chen က CF, ချမ်း SH ။ ကြွက်များတွင်ကင်းသဖြင့်သွေးဆောင် electroencephalograph desynchronization ၏ပါဝါကိုရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အ medial prefrontal cortex မှာ noradrenergic neurotransmission ၏အကဲဖြတ်နှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ synapses ။ 1995; 21: 149-157 ။ [PubMed]
Cohen ကို MX, Elger အီး, ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလူ့ Medial တိုကျရိုကျ Cortex အတွက်ဂျေ Oscillatory လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အဆင့်-လွှဲခွင်စုံတွဲကျဆင်းခဲ့သည်။ J ကို Cogn neuroscience 2008 [PubMed]
Dale လေး။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI များအတွက်အကောင်းဆုံးစမ်းသပ်ဒီဇိုင်း။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 1999; 8: 109-114 ။ [PubMed]
က de Araujo IE ကို, Kringelbach ML, Rolls ET, McGlone အက်ဖ်လူ့ cortical ခံတွင်း၌ရေကိုမှတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အငတ်ခံ၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကို Neurophysiol ။ 2003; 90: 1865-1876 ။ [PubMed]
Delgado MR ။ လူ့ striatum အတွက်ဆုလာဘ်-related တုံ့ပြန်မှု။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1104: 70-88 ။ [PubMed]
Desikan RS, Segonne က F, Fischl B, Quinn BT, Dickerson ဘီစီနီ: D, Buckner RL, Dale လေး, Maguire RP, Hyman BT, အဲလ်ဘတ်က MS, Killiany RJ ။ MRI အပေါ်လူ့ဦးနှောက် cortex subdividing တစ်ခု automated တံဆိပ်ကပ်မှုစနစ်အကျိုးစီးပွား gyral အခြေစိုက်ဒေသများသို့စိစစ်သည်။ Neuroimage ။ 2006; 31: 968-980 ။ [PubMed]
Devinsky အို Morrell MJ, Vogt BA ဘွဲ့။ အပြုအမူမှ anterior cingulate cortex ပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ ဦးနှောက်။ 1995; 118: 279-306 ။ [PubMed]
Dillon DG, ကေတီဟုမ်း AJ, Jahn AL, Bogdan R ကို, Wald ll, Pizzagalli DA ။ မက်လုံးပေးအပြောင်းအလဲနဲ့၏သူတွေရဲ့စားသောက်အဆင့်သာရှိပြီးပြည်ပမှ anticipatory နှင့်ဆက်စပ်အာရုံကြောဒေသ Dissociation ။ Psychophysiology ။ 2008; 45: 36-49 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Drevets WC, Gautier ကို C, စျေး JC, Kupfer DJ သမား, Kinahan PE, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, စျေး JL, Mathis CA. လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 81-96 ။ [PubMed]
Drevets WC, စျေး JL, Simpson JR, Jr, Todd RD, Reich T က, Vannier M က, Raichle ME ။ ခံစားချက်မမှန်အတွက် Subgenual prefrontal cortex မူမမှန်။ သဘာဝ။ 1997; 386: 824-827 ။ [PubMed]
Epstein J ကို, ပန် H ကို, Kocsis JH ယန် Y ကို, ဘတ္ T က, Chusid J ကို, Hochberg H ကို, Murrough J ကို, Strohmayer အီး, Stern ပာအီး, Silbersweig DA ။ ပုံမှန်ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ်စိတ်ဓာတ်အတွက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှ ventral striatal တုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 163: 1784-1790 ။ [PubMed]
ကြွက်များတွင် Ferger B, Kropf W က, electroencephalogram အပေါ် Kuschinsky K. လေ့လာရေး (EEG) ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဃ-စိတ်ကြွဆေး၏အလယ်အလတ်ဆေးများမဟုတ်ဘဲ D1 receptors ထက် D2 ကိုသက်ဝင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ Psychopharmacology (Berl) 1994; 114: 297-308 ။ [PubMed]
Fischl B, Salat DH, Busa အီး, အဲလ်ဘတ်က M, Dieterich M က, Haselgrove ကို C, ဗန် der Kouwe တစ်ဦးက, Killiany R ကို, ကနေဒီ, D, Klaveness S က, Montillo တစ်ဦးက, Makris N ကို, ရို B, Dale လေး။ မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက် segment: လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ neuroanatomical အဆောက်အဦများ၏ automated တံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 33: 341-355 ။ [PubMed]
Fischl B, ဗန် der Kouwe တစ်ဦးက, Destrieux ကို C, Halgren အီး, Segonne က F, Salat DH, Busa အီး, Seidman LJ, စတိန်း J ကို, ကနေဒီ, D, Caviness V ကို, Makris N ကို, ရို B, Dale လေး။ အလိုအလျောက်လူ့ဦးနှောက် cortex parcellating ။ Cereb Cortex ။ 2004; 14: 11-22 ။ [PubMed]
ဖလက်ချာကို PC, McKenna PJ, Frith CD ကို, Grasby pm တွင်, Friston KJ, Dolan RJ ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging နှင့်အတူလေ့လာခဲ့တဲ့အဆင့်အလိုက်သတ်မှတ်ထားသောမှတ်ဉာဏ်တာဝန်စဉ်အတွင်း schizophrenia အတွက်ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 55: 1001-1008 ။ [PubMed]
Gariano RF, အာရှရပင်လေး။ အဆိုပါ medial prefrontal နှင့် anterior cingulate cortical ၏ဆွခြင်းဖြင့် midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်သွေးဆောင်ကွဲပစ်ခတ်ရန်။ ဦးနှောက် Res ။ 1988; 462: 194-198 ။ [PubMed]
Gaspar P ကို, Berger B, Febvret တစ်ဦးက, Vigny တစ်ဦးကဟင်နရီ JP ။ tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine-beta-hydroxylase ၏နှိုင်းယှဉ် immunohistochemistry အားဖြင့်ထင်ရှားသကဲ့သို့လူ့ဦးနှောက် cortex ၏ catecholamines innervation ။ J ကို comp Neurol ။ 1989; 279: 249-271 ။ [PubMed]
ကောင်းသော, DC, Tallent Ka, Matt CW ။5နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ-အန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏လက်တွေ့အနေအထားကို: အ psychometric High-အန္တရာယ်မဟာဗျူဟာ၏ထပ်မံအတည်ပြု။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 2005; 114: 170-175 ။ [PubMed]
အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု valenced မှ Gotlib ih, Sivers H ကို, Gabrieli JD, Whitfield-Gabrieli S က, Goldin P ကို, မိုင်းနား KL, Canli တီ Subgenual anterior cingulate activation ။ Neuroreport ။ 2005; 16: 1731-1734 ။ [PubMed]
Grabenhorst က F, Rolls ET, သိမှတ်ခံစားမှုအရသာနှင့်အရသာမှကိုထိခိုက်တုံ့ပြန်မှု modulates ဘယ်လို Bilderbeck အေ: အ orbitofrontal နှင့် pregenual cingulate cortical အပေါ်အထက်မှအောက်သို့လွှမ်းမိုးမှု။ Cereb Cortex ။ 2008; 18: 1549-1559 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အလွဲသုံးစားမှု Basal ganglia function ကိုပွောငျးလဲနိုငျဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကိုနားလည်ဘို့က၎င်း၏ဆက်စပ်မှု: dopamine စနစ်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏လုပ်သူများ / phasic မော်ဒယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995; 37: 111-129 ။ [PubMed]
Greenwald MK, Roehrs က TA ။ mu-opioid Self-အုပ်ချုပ်ရေး passive အုပ်ချုပ်ရေး vs ဘိန်းဖြူချိုးဖောက် differential ကို EEG activation ထုတ်လုပ်သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 212-221 ။ [PubMed]
Grimm S က, Boesiger P ကို, Beck J ကို, Schuepbach: D, Bermpohl က F, ဝေါလ်တာက M, Ernst J ကို, ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ: D, Boeker H ကို, Northoff G. အနှိမ့်ကျအောကျခံအတွက် Emotion ထုတ်ယူခြင်းစဉ်အတွင်းပုံမှန်-Mode ကိုကွန်ယက်အတွက်အနုတ် BOLD တုံ့ပြန်ချက်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology 2008 [PubMed]
Haber SN ကင်မ် KS, Mailly P ကို, Calzavara R. ဆုကြေး-related cortical သွင်းအားစုမက်လုံးပေး-based သင်ယူမှုများအတွက်အလွှာပေး, အသင်းအဖွဲ့များ cortical ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ interface တစ်ခုကိုမျောက်ဝံများအတွက်ကြီးမားတဲ့ striatal ဒေသသတ်မှတ်။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 8368-8376 ။ [PubMed]
Bartussek ဃ electroencephalograph asymmetry အနားယူပါသလား Hagemann: D, Naumann အီး, ယော JF တစ်ဦးရိုရောင်ပြန်ဟပ်? ငုပ်လျှိုးနေ State-ရိုသီအိုရီတစ်ခုလျှောက်လွှာ။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 2002; 82: 619-641 ။ [PubMed]
Harvey စာတိုက်, Pruessner J ကို, Czechowska Y ကို, ရို anhedonia အတွက် Lepage အမ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: Non-လက်တွေ့ဘာသာရပ်များအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 12703: 767-775 ။ [PubMed]
Hasler, G, Drevets WC, Manji ဟောင်ကောင်, Charney DS ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါများအတွက် endophenotypes တွေ့ရှိ။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1765-1781 ။ [PubMed]
Hasler, G, Fromm က S, Carlson PJ, Luckenbaugh DA, Waldeck T က, Geraci M က, Roiser JP, Neumeister တစ်ဦးက, Meyer N ကို, Charney DS, Drevets WC ။ လွှတ်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာဘာသာရပ်များအတွက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါနှင့်အတူ unmedicated ဘာသာရပ်များအတွက် catecholamines ကွယ်ပျောက်သွားအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 65: 521-531 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Heath RG ။ လူကိုပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု။ နက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အော်ဂဇင်စဉ်အတွင်း electroencephalograms ။ အာရုံကြောနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ဂျာနယ်။ 1972; 154: 3-18 ။ [PubMed]
စိတ်ကျရောဂါအတွက် limbic စနစ်နှင့် prefrontal cortex အတွက် Ito က H ကို, Kawashima R ကို, Awata S က, Ono က S, Sato K ကို Goto R ကို, Koyama M က, Sato က M, ဖူကူအိပ်ချ် Hypoperfusion: ခန္ဓာဗေဒစံချိန်စံညွှန်း technique ကိုအတူ SPECT ။ J ကို Nucl Med ။ 1996; 37: 410-414 ။ [PubMed]
Juckel, G, Schlagenhauf က F, Koslowski M က, Filonov: D, Wustenberg T က, Villringer တစ်ဦးက, Knutson B, Kienast T က, Gallinat J ကို, Wrase J ကို, ပုံမှန်, atypical မဟုတ်, neuroleptics နဲ့ကုသ schizophrenic လူနာ ventral striatal ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ Heinz အေအလုပ်မဖြစ် ။ Psychopharmacology (Berl) 2006a; 187: 222-228 ။ [PubMed]
Juckel, G, Schlagenhauf က F, Koslowski M က, Wustenberg T က, Villringer တစ်ဦးက, Knutson B, Wrase J ကို, schizophrenia အတွက် ventral striatal ဆုလာဘ်ခန့်မှန်း၏ Heinz အေအလုပ်မဖြစ်။ Neuroimage ။ 2006b; 29: 409-416 ။ [PubMed]
Keedwell PA ဆိုပြီး, အန္ဒြေကို C, Williams က SC, Brammer MJ, Phillips က ML ။ အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် anhedonia များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 843-853 ။ [PubMed]
ကနေဒီ DP, Redcay အီး, Courchesne အီးပိတ်ထားရန်ပျက်ကွက်: အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအတွက်အနားယူအလုပ်လုပ်တဲ့မူမမှန်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006; 103: 8275-8280 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကနေဒီ SH, အီဗန် KR, Kruger က S, Mayberg HS, Meyer JH, McCann က S, Arifuzzman AI အ, Houle S က, Vaccarino FJ ။ ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်အပြောင်းအလဲများအဓိကစိတ်ကျရောဂါ၏ paroxetine ကုသမှုပြီးနောက် positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူတိုင်းတာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 899-905 ။ [PubMed]
Kirsch P ကိုရိုက်တာက M, Mier: D, Lonsdorf T က, Stark R ကို, Gallhofer B, Vaitl: D, Hennig ဂျေ Imaging ကမျိုးဗီဇ-ပစ္စည်းဥစ္စာ interaction က: များ၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အပေါ် DRD2 TaqIA polymorphic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် dopamine agonist bromocriptine ဆုလာဘ်။ neuroscience ပေးစာ။ 2006; 405: 196-201 ။ [PubMed]
Knyazev GG ။ လှုံ့ဆျောမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဦးနှောက်လှိုအတွက်ထင်ဟပ်သူတို့ရဲ့ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2007; 31: 377-395 ။ [PubMed]
Kropf W က, ကြွက်များတွင် cortical EEG အပေါ် dopamine D1 receptors ၏ဆွ၏ Kuschinsky K. အကျိုးသက်ရောက်မှု: D2 receptors တစ်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်း, putative dopamine autoreceptors တစ်ခု activation နေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Neuropharmacology ။ 1993; 32: 493-500 ။ [PubMed]
Kumar က: P, စားပွဲထိုး, G, Ahearn T က, ပျော့ M က, ရိဒ်, ငါသံမဏိ JD ။ ပုံမှန်မဟုတ်သောယာယီခြားနားချက်ဆုလာဘ်-သင်ယူခြင်းအဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်အချက်ပြမှုများ။ ဦးနှောက်။ 2008; 131: 2084-2093 ။ [PubMed]
Lancaster JL, Rainey LH, Summerlin JL, Freitas CS, Fox က PT, အီဗန်, AC, Toga AW, Mazziotta JC ။ လူ့ဦးနှောက်၏အလိုအလျောက်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း: တစ်ရှေ့ဆက်-transform နည်းလမ်းများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်အပေါ်တစ်ဦးကပဏာမအစီရင်ခံစာ။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 1997; 5: 238-242 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lavin တစ်ဦးကရေ့ AA ကို။ ကြွက် ventral pallidal အာရုံခံ၏ဇီဝကမ္မဂုဏ်သတ္တိများ Vivo အတွက် intracellularly မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ J ကို Neurophysiol ။ 1996; 75: 1432-1443 ။ [PubMed]
Leung LS, Yim CY ။ ထုံဆေးနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်စည်းချက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်-အကြိမ်ရေလှုပ်ရှားမှုများ။ J ကို Physiol Pharmacol နိုင်သလား။ 1993; 71: 311-320 ။ [PubMed]
Leyton M က, Boileau ငါ Benkelfat ကို C, Diksic M က, Baker, G, extracellular dopamine, မူးယစ်ဆေးလိုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာထဲမှာ Dagher အေဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်တိုး: ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦးပေ / [11C] raclopride လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 1027-1035 ။ [PubMed]
စိတ်ကျရောဂါမှ Loas G. အအားနည်း: anhedonia အပေါ်ဗဟိုပြုတဲ့မော်ဒယ်။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 1996; 41: 39-53 ။ [PubMed]
Luoh HF, Kuo ကတီဘီ, ချမ်း SH, ပန် WH ။ ကြွက်များတွင်ကင်းသဖြင့်သွေးဆောင် electroencephalograph desynchronization ၏ပါဝါကိုရောင်စဉ်တန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အ medial prefrontal cortex မှာ dopaminergic neurotransmission ၏ microdialysis အကဲဖြတ်နှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ synapses ။ 1994; 16: 29-35 ။ [PubMed]
Lustig က C, Snyder AZ, Bhakta M က, O 'Brien KC, McAvoy M က, Raichle ME, မောရစ် JC, Buckner RL ။ functional Deactivate: အအယ်လ်ဇိုင်းမားအမျိုးအစားအသက်အရွယ်နှင့်စိတ်ဖောက်ပြန်နှင့်အတူပြောင်းလဲမှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2003; 100: 14504-14509 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
MacLeod AK, Salaminiou အီးစိတ်ကျရောဂါအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အနာဂတ်-စဉ်းစားတွေးခေါ်လျှော့ချ: သိမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေအချက်များ။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion ။ 2001; 15: 99-107 ။
MacLeod AK, တာတာ: P, Kentish J ကို, Jacobsen အိပ်ချ်နောက်ကြောင်းပြန်နှင့်စိုးရိမ်သောကများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာအတွက်အလားအလာသိမြင်မှု။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion ။ 1997; 11: 467-479 ။
Mayberg HS, Brannan SK ကို, Mahurin RK, Jerabek PA ဆိုပြီး, Brickman JS, Tekell JL, ဆေးလ်ဗားဂျာ McGinnis S က, Glass ကို TG, မာတင် CC ကို, Fox က PT ။ စိတ်ကျရောဂါအတွက် Cingulate function ကို: ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအလားအလာခန့်မှန်း။ Neuroreport ။ 1997; 8: 1057-1061 ။ [PubMed]
Mayberg HS, Lewis က PJ, Regenold W က, Wagner HN ။ , ရပ်များမှာတစ်ဘက်စွန်းစိတ်ကျရောဂါအတွက် Jr Paralimbic hypoperfusion ။ J ကို Nucl Med ။ 1994; 35: 929-934 ။ [PubMed]
Meehl PE ။ Hedonic စွမ်းရည်: အချို့မှန်းဆ။ နွားထီး Menninger Clin ။ 1975; 39: 295-307 ။ [PubMed]
မိုက်ကယ် CM, Henggeler B, Brandeis D ကို, ဦးနှောက် alpha / theta / မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အလိုအလျောက် mentation ၏ mode ကို၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏သတင်းရင်းမြစ်၏ Lehmann ဃ Localization ။ ဇီဝကမ္မတိုင်းတာခြင်း။ 1993; 14 (ပျော့ပျောင်း 4A): A21-26 ။ [PubMed]
အဆိုပါ FFT dipole အကြမ်းဖျင်းသုံးပြီးမိုက်ကယ် CM, Lehmann: D, Henggeler B, EEG မြစ်ဝကျွန်းပေါ်, theta, alpha နဲ့ beta ကို frequency band ၏သတင်းရင်းမြစ်၏ Brandeis ဃ Localization ။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol ။ 1992; 82: 38-44 ။ [PubMed]
Miranda R ကို, Mennin DS ။ အနာဂတျအကွောငျးအဆိုးမြင်ဟောကိန်းများအတွက်စီးပွားပျက်ကပ်, ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကရောဂါနှင့်ဧကန်အမှန်။ သိမှုကုထုံးနှင့်သုတေသန။ 2007; 31: 71-82 ။
Mitterschiffthaler MT, Kumari V ကို, Malhi GS, Brown က RG, Giampietro VP, Brammer MJ, နို့စို့ J ကို, Poon L ကို, Simmons တစ်ဦးက, အန္ဒြေကို C, anhedonia အတွက်သာယာသောလှုံ့ဆော်မှုမှ Sharma ကတီဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောတုံ့ပြန်မှု: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neuroreport ။ 2003; 14: 177-182 ။ [PubMed]
Moore က AC အ, MacLeod AK, Barnes: D, Langdon DW ။ relapsing-remitting မျိုးစုံနဗ်ကြောများတွင်အနာဂတ်-ညွှန်ကြားတှေးအချေါနှငျ့စိတ်ကျရောဂါ။ ကနျြးမာရေးစိတ်ပညာဗြိတိသျှဂျာနယ်။ 2006; 11: 663-675 ။ [PubMed]
Mülertကို C, Juckel, G, Brunnmeier M က, Karch S က, Leicht, G, Mergl R ကို, Moller HJ, Hegerl ဦး, အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှု Pogarell O. ဘီဘာအို: အယူအဆ၏ပေါင်းစည်းမှု။ J ကို disorders အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ 2007; 98: 215-225 ။ [PubMed]
Murase S က, Grenhoff J ကို, Chouvet, G, Gonon အပြည်ပြည်သွား, Svensson TH ။ Prefrontal cortex Vivo အတွက်လေ့လာခဲ့ကြွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံအတွက်ကွဲပစ်ခတ်ရန်နှင့် transmitter ကိုလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ။ neuroscience လက်တ။ 1993; 157: 53-56 ။ [PubMed]
Nagano-Saito တစ်ဦးက, Leyton M က, Monchi အို Goldberg YK, သူက Y, Dagher အေ Dopamine တွေပျက်စီးမှုတစ် Set-ပြောင်းလဲတာဝန်စဉ်အတွင်း frontostriatal functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုချို့ယွင်း။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 3697-3706 ။ [PubMed]
Niedermeyer အီးအိပ်စက်ခြင်းနှင့် EEG ။ In: Niedermeyer E, Lopes da Silva F, အယ်ဒီတာများ။ Electroencephalograpghy: အခြေခံနိယာမများ၊ လက်တွေ့အသုံးချမှုများနှင့်ဆက်စပ်နယ်ပယ်များ။ Williams နှင့် Wilkins; Baltimore, MD: 1993 စစ 153-166 ။ ။
O'Doherty J ကိုဒါယန်း P ကို, Schultz J ကို, Deichmann R ကို, Friston K ကို Dolan RJ ။ ဆာအေးစက်အတွက် ventral နှင့် dorsal striatum ၏ Dissociable အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 2004; 304: 452-454 ။ [PubMed]
ကြားရှိ J ကို, septal ဧရိယာနှင့်ကြွက်ဦးနှောက်၏အခြားဒေသလျှပ်စစ်ဆွကထုတ်လုပ် Milner P. အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1954; 47: 419-427 ။ [PubMed]
Öngür: D, စျေး JL ။ ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသား၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် medial prefrontal cortex အတွင်းကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်း။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 206-219 ။ [PubMed]
Oswald LM, Wong က DF, McCaul M က, Zhou Y ကို, Kuwabara H ကို, Choi, L, Brasic J ကို, Wand GS ။ ventral striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်, cortisol လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 821-832 ။ [PubMed]
Pascual-Marquis RD, Lehmann: D, Koenig T က, Kochi K ကို Merlo MC, ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံ: D, Koukkou အမ်အင် resolution ကိုဦးနှောက်လျှပ်စစ်သံလိုက် tomography (LORETA) စူးရှ, neuroleptic-နုံ, ပထမ-ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်, တန်ဖိုးရှိရှိ schizophrenia ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1999; 90: 169-179 ။ [PubMed]
Paulus အမတ်, ဖရန့် LR ။ Ventromedial prefrontal cortex activation preference ကိုတရားစီရင်ပိုင်ဘို့အရေးကြီးသည်။ Neuroreport ။ 2003; 14: 1311-1315 ။ [PubMed]
BM, Raack N ကို, Sojka B, Goder R ကို, Aldenhoff JB, Ferstl R. convergence နှင့်စိတ်ကျရောဂါအတွက်အနံ့နှင့်စိတ်ခံစားမှုများမတူကွဲပြားသက်ရောက်မှု Pause ။ Psychophysiology ။ 2003; 40: 209-225 ။ [PubMed]
ဖန် KL, အာမခံ T က, တေလာ SF, Emotion ၏ Liberzon ဗြဲ Functional Neuroanatomy: ပေနှင့် fMRI အတွက် Emotion Activation လေ့လာရေးတစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း။ Neuroimage ။ 2002; 16: 331-348 ။ [PubMed]
Pizzagalli DA, Iosifescu: D, Hallett LA က, Ratner ကီလိုဂရမ်, Fava အမ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက် hedonic စွမ်းရည်လျှော့ချ: တစ်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာဆုလာဘ်တာဝန်ကနေအထောက်အထား။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2009; 43: 76-87 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pizzagalli DA, Jahn AL, O'Shea JP ။ တစ်အချက်ပြ-detection စနစ်ချဉ်းကပ်: တစ်ခု anhedonic phenotype တစ်ဦးရည်မှန်းချက်စရိုက်လက္ခဏာတွေဆီသို့။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 319-327 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Pizzagalli DA, Oakes TR, Fox က AS, Chung MK, Larson CL, Abercrombie HC, Schaefer သည် SM, Benca RM, Davidson RJ ။ melancholia အတွက် functional သော်လည်းမဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ subgenual prefrontal cortex မူမမှန်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 325 (9): 393-405 ။ [PubMed]
Pizzagalli DA, Pascual-Marquis RD, Nitschke JB, Oakes TR, Larson CL, Abercrombie HC, Schaefer သည် SM, Koger ဖက်စပ်, Benca RM, Davidson RJ ။ ဦးနှောက်လျှပ်စစ် tomography ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထံမှသက်သေအထောက်အထား: anterior cingulate လှုပ်ရှားမှုအဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက်ကုသမှုတုံ့ပြန်မှုဒီဂရီခန့်မှန်းထားပါတယ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 405-415 ။ [PubMed]
Pizzagalli DA, Peccoralo LA က, Davidson RJ, Cohen ကို JD ။ ဓာတ်လှေကားစိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အမှားမှ anterior Cingulate လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောတုံ့ပြန်ချက်အနားယူ: တစ်ဦးက 128-Channel ကို EEG လေ့လာပါ။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2006; 27: 185-201 ။ [PubMed]
အပြုအမူ၏ Rado အက်စ် Psychoanalysis: Colelcted သတင်းစာများက။ vol ။ 1 ။ Grune နှင့် Stratton; နယူးယောက်: 1956 ။
Reddy RV, Moorthy အက်စ်အက်စ်, Mattice T က, Dierdorf SF, Deitch RD ။ propofol များနှင့် methohexital ၏သက်ရောက်မှုများ, Jr တစ်ခု electroencephalograph နှိုင်းယှဉ်။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol ။ 1992; 83: 162-168 ။ [PubMed]
ရိဒ်က MS, Flammino က F, Howard B, Nilsen: D, Prichep LS ။ လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးတုံ့ပြန်အရေအတွက် EEG ၏မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ပုံရိပ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 872-884 ။ [PubMed]
Rolls ET, Grabenhorst က F, Parris BA ဘွဲ့။ ဦးနှောက်ထဲမှာနွေးသာယာသောခံစားချက်များကို။ Neuroimage ။ 2008; 41: 1504-1513 ။ [PubMed]
Rolls ET, Kringelbach ML, က de Araujo IE ကို။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာသာယာသောနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့အမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2003; 18: 695-703 ။ [PubMed]
Rushworth MF, ဘီရန်း TE, Rudebeck PH သည်, ဝေါ်လ်တန် ME ။ ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်လူမှုရေးအပြုအမူအတွက် cingulate နှင့် orbitofrontal cortex များအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှိုငျးယှဉျ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2007; 11: 168-176 ။ [PubMed]
Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Farrar တစ်ဦးက, Mingote သည် SM ။ နျူကလိယ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု-related လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine နဲ့ဆက်စပ် forebrain ဆားကစ် accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 191: 461-482 ။ [PubMed]
Santesso DL, Dillon DG, Birk JL, ကေတီဟုမ်း AJ, Goetz အီး, Bogdan R ကို, Pizzagalli DA ။ အပြုအမူ, electrophysiological နှင့် neuroimaging ဆက်စပ်မှု: အားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်။ Neuroimage 2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Scheeringa R ကို, Bastiaansen MC, Petersson KM, Oostenveld R ကို, Norris က DG, Hagoort P. တိုကျရိုကျ theta EEG လှုပ်ရှားမှုကျိန်းဝပ်ပြည်နယ်ထဲမှာကို Default mode ကွန်ယက်အဆိုးဆက်နွယ်နေပါသည်။ int J ကို Psychophysiol ။ 2008; 67: 242-251 ။ [PubMed]
Schlaepfer TE, Cohen ကို MX, Frick ကို C, Kosel M က, Brodesser: D, Axmacher N ကို, ဂျိုး AY, Kreft M က, Lenartz: D, circuitry ဆုချမှ Sturm V. နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်ကိုနှိုးဆွဆန့်ကျင်ဘက်အဓိကစိတ်ကျရောဂါအတွက် anhedonia လျော့ချ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 368-377 ။ [PubMed]
dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ်အချက်ပြမှုများ။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80: 1-27 ။ [PubMed]
Scott JC, ချက်ပြုတ် je, Stanski DR ။ opioid အကျိုးသက်ရောက်မှုများ electroencephalograph quantitative: fentanyl နှင့် sufentanil ၏နှိုင်းယှဉ် pharmacodynamics ။ မေ့ဆေးဗေဒ။ 1991; 74: 34-42 ။ [PubMed]
Sesack SR, Pickel VM က။ နျူကလီးယပ်အတွက် catecholamines ဆိပ်ကမ်း၏ခေါင်းစဉ်မသိအာရုံခံပစ်မှတ်ပေါ်ကြွက် synapses အတွက် Prefrontal cortical efferents septi နှင့် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံအပေါ် accumbens ။ J ကို comp Neurol ။ 1992; 320: 145-160 ။ [PubMed]
Steiger JH ။ တစ်ဦးဆက်စပ်မှု matrix ၏ဒြပ်စင်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်စမ်းသပ်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းလွှာ။ 1980; 87: 245-251 ။
Tremblay LK, Naranjo, CA, ဂရေဟမ် SJ, Herrmann N ကို, Mayberg HS, Hevenor S က, Busto UE ။ တစ်ဦး dopaminergic စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ထင်ရှားအဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါအတွက်ပြောင်းလဲဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ functional neuroanatomical အလွှာဟာ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 62: 1228-1236 ။ [PubMed]
Haes JI, Maguire RP, Jager PL, Paans လေး, တွင်း Boer ဂျေအေက de Udo ။ Methylphenidate-သွေးဆောင်အဆိုပါ anterior cingulate ၏ activation ပေမယ့်မ striatum: ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦး [15O] H2O ပေလေ့လာမှု။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2007; 28: 625-635 ။ [PubMed]
Videbech P ကို, Ravnkilde B, Pedersen TH, Hartvig H ကို, Egander တစ်ဦးက, Clemmensen K ကို Rasmussen NA, Andersen က F ကို, Gjedde တစ်ဦးက, Rosenberg က R. အဆိုပါဒိန်းမတ်ပေ / စိတ်ကျရောဂါစီမံကိန်းကို: လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှု။ တစ်ဦးကဒေသများတွင်-of အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Acta Psychiatric Scand ။ 2002; 106: 35-44 ။ [PubMed]
Vogt BA, Nimchinsky EA ၏, Vogt LJ, Hof PR စနစ်။ လူ့ cingulate cortex: မျက်နှာပြင် features တွေ, ပြားချပ်ချပ်မြေပုံများ, နှင့် cytoarchitecture ။ J ကို comp Neurol ။ 1995; 359: 490-506 ။ [PubMed]
Araujo IE ကို, Cowen PJ, Rolls ET, Kringelbach ML, Smith က ka, Jezzard P ကို, RJ အနာ, Matthews ကလေးက de Völlm BA, ။ စိတ်ကြွဆေးမူးယစ်ဆေးနုံလူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ဆုလာဘ် circuitry မြှင့်လုပ်ဆောင်။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1715-1722 ။ [PubMed]
Watson ဟာ: D, Clark က LA က။ စီးပွားပျက်ကပ်နှင့်လွမ်းဆွေးစိတ်ထား။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ဥရောပဂျာနယ်။ 1995; 9: 351-366 ။
Watson ဟာ: D, Clark က LA က, Tellegen အေဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာ၏အကျဉ်းအစီအမံများ validation ကိုထိခိုက်စေ: အ PANAS အကြေး။ J ကို Pers Soc Psychol ။ 1988; 54: 1063-1070 ။ [PubMed]
Watson ဟာ: D, Weber K ကို Assenheimer JS, Clark က LA က, Strauss ME, မက်ကော်မစ် RA ။ တစ်ပွင့်ဆိုင်မော်ဒယ်စမ်းသပ်: ဗြဲစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာလက္ခဏာအကြေးခွံများ convergence နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတရားဝင်မှုသုံးသပ်စိစစ်။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 1995; 104: 3-14 ။ [PubMed]